အပြိုကွီး မမ – My Blog
မမဖွူက အသကျ ၃၀ နီးပါး ရှိနပွေီ ။ အပြိုကွီးဆိုတာတောငျမှ အတျောပငျဟိုငျးနပွေီဟု ပွောရမညျ ။ မမဖွူ က အတျောလှသညျ ။ အသားဖွူ ဖွူ နှငျ့ ကိုယျလုံးကိုယျပေါကျက ဗှီဒီယိုမငျးသမီးတှလေိုလှသညျ ။ အခြိုးကသြညျ။ သူ့ကို ကွိုကျတဲ့သူတှေ ရှိ မှာပဲ ။ ဘာလို့သူက မယူခဲ့တာလဲ ဆိုသော အတှေးတှကေ ဖိုးခြို ခေါငျးထဲ မကွာခဏ ရောကျလာနကေပြေါ့…။
ဖိုးခြို အသကျ ၂၀ ထဲရောကျနပွေီ ။ မိနျးမတှရေဲ့ အလှအပကို ခံစားတတျရုံမက ရှာမှာနတေုံးက ရှာလူကွီးရရဲ့ သမီးကိုပငျ ခိုးပွေးဖူးသညျ ။ သူ့သမီးကို ခွသေလုံးအိမျတိုငျ ဖိုးခြိုနဲ့ သဘောမတူလို့ အတငျးလိုကျခှဲပွီး သူ့သမီးကို မွို့သို့ ပို့လိုကျသညျ ။ အသကျ ၁၉ နှဈနဲ့ ဖိုးခြို တဈခုလပျ ဘ၀ တိုးတိုးတိတျတိတျ ရောကျခဲ့ရသညျ ။
ရှာတှငျ မနခေငျြတော့သဖွငျ့ မွို့သှားခငျြကွောငျးပွောတော့ ဖိုးခြို၏ တဈဦးတညျးသော ဦးလေးက သူ၏ သူငယျခငျြး ရနျကုနျတှငျ ကားဘျောဒီရုံ လုပျနသေူ ကိုစံဖထေံသို့ စာရေးပေး လိုကျသညျ။ လကျရငျးတပညျ့လိုခငျြနသေူ ကိုစံဖကေလဲ ဖိုးခြိုကို လိုလိုလားလား လကျခံခဲ့သညျ ။ ကိုစံဖေ့ ဇနီး မခငျလှကလဲ တဈရှာထဲသား ဖိုခြိုကို ခငျသညျ ။ ကိုစံဖကေ မွို့တကျသှားတာ ကွာပွီ မို့ သိပျမသိခဲ့ပမေဲ့ မခငျလှကိုတော့ ရှာမှာနထေဲက ဖိုးခြို ကောငျးကောငျးသိသညျ ။
ကိုစံဖတေို့ လငျမယားက ဖိုးခြိုကို သူတို့နှငျ့ တဈအိမျထဲ အတူ နထေိုငျစခေဲ့သညျ ။ အိမျမှာက ကိုစံဖတေို့ လငျမယားနှငျ့ ကိုစံဖေ၏ ညီမ ဖိုးခြိုအချေါ မမဖွူ ဟုဆိုသော ဖွူဖွူ စနျးတို့သာ ရှိလသေညျ ။ ကိုစံဖကေ ဘျောဒီဆရာ ဝငျငှကေကောငျးတော့ ဇိမျခံရငျး က ဇျောသမား ဖွဈလာခဲ့ရသညျ ။ ၂၄ နာရီ ကိုစံဖထေံမှ အရကျနံ့က မပွတျရနတေတျသညျ ။ အခု ဖိုးခြိုကလညျး ရောကျလာပွီး တဈ နှဈကြျောလောကျကွာလာတော့ အလုပျလဲ ကွိုးစား အပငျပနျးလဲခံလသေော ဖိုးခြိုကို အတျောလေး မကျြနှာလှဲလို့ ရနပေပွေီ ။
ဒီတော့ ကိုစံဖကေ ခါတိုငျးထကျ ပိုသောကျလာသညျ ။ လကျထဲမှာ ငှကေသီးနတေော့ မခငျလှကလဲ ကိုစံဖကေို မတား ။ သူကပ ငျ ကွညျဖွူ စှာဖွငျ့ ကိုစံဖသေောကျရာတှငျ မကွာခဏ လိုကျပါနတေတျသေးသညျ ။ အခုလညျး ညနေ ၄ နာရီထိုးသညျနှငျ့ ကိုစံဖေ က အလုပျသိမျးကာ ရခြေိုးပွီး လငျမယားနှဈယောကျ ထှကျသှားကွခပြွေီ .။ ဖိုးခြို ၆ နာရီ ထိုးမှ အလုပျကို လကျစသတျကာ ရခြေိုးလိုကျသညျ ။ ရမေိုးခြိုးပွီး အဝတျအစားလဲနတေုနျး မမဖွူရဲ့ အသံက ထုံးစံအတိုငျး ထှကျပျေါလာသညျ ။ ဖိုးခြိုရေ ထမငျးစားကွမယျဟေ့.. ဟုတျကဲ့…မမ.. ဒါက ညနတေိုငျး ကွားနရေသညျ့ အသံဖွဈသညျ ။ ထမငျးဝိုငျးတှငျ ထိုငျကွတော့ ဖွူဖွူ စနျးက ဖိုးခြိုနဲ့ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ ထိုငျစားသညျ ။ ထမငျးတဈလုပျ စားလိုကျ ဖိုးခြိုမကျြနှာကို မကျြလုံးကွီးတှေ ဝငျ့ကွညျ့လိုကျ ဖွငျ့ လုပျနသေညျ ။
ဖိုးခြိုကတော့ ထမငျးကိုသာ ငုံ့ပွီးလှေးနသေညျ ။ မကျြလုံးကို လှနျမကွညျ့ရဲ့ ။ ဗွောငျသာ မကွညျ့ရဲတာ ၊ မကွာခဏတော့ မမဖွူ ကို ခိုးခိုးပွီးကွညျ့တတျသညျ ။ မမဖွူကလဲ လှတာကိုး…။ လူသားစားဖူးသော ကြားက လူနံ့ရလငျြ အမွှီးနှံ့ ခေါငျးထောငျရှာ တတျသညျ ။ ဖိုးခြိုကတော့ ဖွူ ဖွူ စနျးကို ခိုးခိုးကွညျ့ပွီး သာယာနတေတျသညျ ။ ဖိုးခြို ထမငျးကို ခေါငျးမဖျောတမျး ငုံ့စားနပေမေဲ့ မမဖွူ ထမငျးစားလိုကျ သူ့ကို မကျြလုံးရှဲနဲ့ ကွညျ့လိုကျ လုပျနမေညျကို အတတျသိသညျ ။
ဟယျ..ဟငျးက အရညျနဲ့သှားပွီ.. ပွောပွောဆိုဆို မမဖွူက ဟငျးပနျကနျကို ကောကျကိုငျပွီး မီးဖိုခြောငျဖကျ သို့ ထှကျအသှား သူမ၏နောကျကြောကို ထုံးစံအတိုငျး ဖိုးခြို ခိုးကွညျ့လိုကျတော့ ခါတိုငျးနဲ့ မတူ ရငျထဲတှငျ တငျးသှားရသညျ ။ ကားအယျလုံထဈ ပွီး လှုပျခါနသေော တငျသားကွီးနှဈလုံးက ခါတိုငျးထကျပိုပွီး ဘာမှမထူးပမေဲ့ ထိုတငျသားကွီး နှဈခုစပျကွား အောကျဖကျနားတှငျ ဖွူ ဖွူ စနျး ဝတျထားသော ထမိနျမှာ အမွှောငျးလိုကျလေး စိုနသေညျကို တှမွေ့ငျလိုကျရခွငျး ဖွဈသညျ ။ မမဖွူ ငါ့ကို ကှကျကွညျ့ ကှကျကွညျ့လုပျပွီး စိတျကူးနဲ့ သာယာနတောပါလား ဆိုသညျ့အခကျြက ဖိုးခြိုစိတျထဲ သံမှိုစှဲသှားခဲ့လသေညျ ။
ဒုနျး….ဒုနျး……ဒုနျး ဒုနျး…. ဖိုးခြိုနားစှငျ့လိုကျတော့ မမဖွူ အခနျးထဲက တူထုသံမှနျး သိလိုကျသညျ..။ ဒုနျး ဒုနျး… မမဖွူ…ဘာ ရိုကျနတောလဲ…ကနြျော လုပျပေးရမလား.. ခွငျတောငျကွိုးနိမျ့နလေို့ သံကိုမွှငျ့ရိုကျနတောပါကှယျ.. ဒုနျး…ဒုနျး… ဖိုးခြို လှဈခနဲ မမဖွူ၏ အိပျခနျးထဲ ရောကျသှားသညျ.။ ဖွူဖွူစနျးတဈယောကျ ကွမျးပွငျတှငျ ခွဖြေားလေးထောကျ လကျနှဈဖကျကိုအပျေါသို့ ဆနျ့ပွီး တဈဖကျက သံကိုကိုငျ တဈဖကျက တူနဲ့ မမှီမကနျး လှမျးရိုကျနသေညျ..။
ဒုနျးဒုနျး…ဟောတော့…. ခွဖြေားကိုထောကျ ခါးကိုစနျ့ပွီး လကျနှဈဖကျကိုလညျး မမှီမကနျး ဆနျ့ထားရသဖွငျ့ ခါးကထမိနျက ကှငျးလုံးကြှတျကတြော့သညျ..။ ဖှေးခနဲ ဖငျကွီးကပျေါသှားသကဲ့သို့ စောကျမှေးအဖုတျလိုကျကွီးကလညျး ဖိုးခြိုကို တဈကိုယျလုံး တောငျ့တငျးသှားစသေညျ..။ မမဖွူ ထဘီကိုငုံ့၍ ကုနျးကောကျလိုကျစဉျ ဖငျနှဈခွမျးကွားမှ နောကျသို့ ပွူးထှကျလာသော စောကျ ပတျကွီးကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျးကွီး တှလေို့ကျရသညျ…။ ထို့ကွောငျ့ ဖိုးခြိုဝတျထားသော ဘောငျးဘီတိုလေးထဲမှ လီးက ဖွောငျး ခနဲ ထောငျထသှားပွီး တောငျမတျလာတော့သညျ..။ မမဖွူ လှညျ့ကွညျ့လိုကျသောအခါ ဘောငျးဘီတိုလေးထဲက လီးက ငေါကျ တောကျကွီး တနျးနသေညျကို အသဲယားစဖှယျကွီး တှလေို့ကျရပွီး ထဘီကို ဖွဈကတတျဆနျး လုံးထှေးဝတျကာ ကွကျသေ သေ သှားမိသညျ..။
စိတျထဲမှာ ဘယျလိုဖွဈသှားသညျမသိ ၊ မမဖွူ၏ ခါးလေးကို ဖိုးခြို ဆတျခနဲ ဆှဲယူလိုကျရာ ခါးလေး ကော့ခနဲ ဖွဈကာ ရငျခငျြး အပျ မိသှားသညျ..။ ခန်ဓကိုယျနှဈခု ပူးကပျလိုကျမိသညျနှငျ့ သနျစှမျးသော ဖိုးခြို၏ လကျမြားက မမဖွူ၏ တဈကိုယျလုံးကို သိမျးကွုံးဖကျ ကာ နှုတျခမျးခငျြး တစေု့ပျလိုကျသညျ..။ လီးတနျကွီးကလညျး မမဖွူ၏ ပေါငျကွားထဲ သို့ သနျသနျမာမာကွီး တိုးဝငျသှားလေ သညျ..။ ပူနှေးခြိုမွသော အနမျးစှမျးအားက မမဖွူ၏ ခန်ဓကိုယျရှိ အကွောအခဉျြမြားကို ကိုငျတှယျလှုပျခါပဈလိုကျသညျ..။ သူမ၏ ခန်ဓကိုယျလေး ငလငျြလှုပျသလို သိမျ့သိမျ့တုနျသှားသညျ..။ မမဖွူ၏ လကျနှဈဖကျကလညျး ဖိုးခြိုလညျပငျးကို ရဈသိုငျးထားမိ လကျြသား ဖွဈသှားလသေညျ..။
ဖိုးခြိုက လူငယျပီပီ လငျြသညျ..။ မမဖွူ ဝတျထားသော ရငျစဘေ့လောကျဈ အင်ျကြီလေးကို ဗွနျးခနဲ ဆှဲကာ ရငျဘတျနှိပျစတှေ့ကေို တဈခကျြတညျးနှငျ့ ဆှဲဖွုတျပဈလိုကျသညျ..။ ပေါကျစီကွီးတှအေလား ဖှေးဖွူသော နို့နှဈလုံး လှဈခနဲ ထှကျလာတော့ ဖိုးခြို ငုံ့၍ စို့သညျ..။ စို့တာမှ အငမျးမရ..အတငျးစို့လတေော့ မမဖွူမှာ ရငျဘတျကလေး ကော့တကျလာသညျ..။ အ….အ…နာ….နာ တယျ..ဖွေးဖွေး….. မရပါ…။ အရှိနျတကျနသေော ဖိုးခြိုက အတငျးငုံ၍ စို့နသေညျ..။ တအားစို့သောကွောငျ့ နို့သီးထိပျမှ အရညျ ကွညျလေးမြားပငျ စိမျ့၍ ထှကျလာကွသညျ..။ နို့ရညျကွညျတို့က ခြိုမွိနျလှသလို နှဈယောကျစလုံး၏ သှေးသားတှကေိုလညျး ဗွောငျးဆနျသှားစသေညျ..။ နို့စို့ရငျး ဖိုးခြို၏ လကျတဈဖကျက စောကျပတျကွီးကိုနှိုကျကာ ရှရှလေး ပှတျပေးသညျ..။ အပျေါ အောကျနှဈဖကျညှပျ၍ ခံစားနရေသောကွောငျ့ မမဖွူမှာ တအငျးအငျးဖွဈလာပွီး ပေါငျတနျရှညျကွီးတှကေ ကားထှကျလာသညျ..။
ဖိုးခြိုက မမဖွူ၏ လကျတဈဖကျကို ဆှဲယူပွီး မာကွောတောငျ့တငျးနသေော လီးကွီးပျေါ တငျပေးလိုကျသညျ..။ လီးကွီးက နဲတာ ကွီးမဟုတျ..။ မမဖွူတဈယောကျ ကွကျသီးတှေ ဖွိုးဖွိုးဖငျြးဖငျြး ထသှားမိသညျ..။ ဖိုးခြို သူ့ဘောငျးဘီလေးကို ခြှတျပဈလိုကျရာ လီးကွီးက တရမျးရမျးဖွငျ့ ထှကျလာတော့သညျ..။ မမဖွူသညျ လီးကွီးကို အံ့သွစှာ ကွညျ့ရငျး ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျကာ လကျ နှဈဖကျဖွငျ့ လီးကို ဆုပျကိုငျလိုကျရာမှ လီးထိပျကို အသာဖွဲကွညျ့လိုကျလသေညျ..။ သပွသေီးမှညျ့လို ညိုမဲပွောငျတငျးနသေော လီးထိပျကွီးက မမဖွူကို ခြုပျထိနျးလိုကျသညျ..။ အမြားအားဖွငျ့ လီးထိပျတှကေ နီရဲနကွေတာ တှဖေူ့းသညျ..။ ဖိုးခြို၏ လီးဒဈ ကွီးကတော့ ထိုသို့မဟုတျ ၊ သပွသေီးမှညျ့ရောငျ ညိုမဲပွောငျတငျးနသေညျ..။
ဒဈကွီးကလညျး ငါးမြှားခြိတျလို နောကျပွနျကော့နသေညျ..။ စောကျခေါငျးထဲသို့ ထိုးဝငျသှားပါက ဒဈက စောကျပတျအတှငျးသားနု နုလေးတှကေို ရကျရကျစကျစကျ ဆှဲခြိတျပဈမညျ့သဘော ရှိသညျ..။ မမဖွူ၏ မကျြနှာဖှေးဖှေးလေး နီမွနျးလကျြ စောကျပတျဝက တစဈစဈ ဖွဈလာရသညျ..။ အရညျကွညျလေးတှေ စိမျ့ထှကျနတေော့သညျ..။ ဟငျး……ဟငျး…သနျလိုကျတဲ့…ဟာကွီး….. မမ ဖွူက ပွောပွောဆိုဆို လကျညှိုးလေးဖွငျ့ လီးထိပျကို တောကျကနဲ ရိုကျလိုကျရာ ဖိုးခြိုဖငျကွီး တုနျခါသှားရသညျ..။ ခဈြစရာ ကွီး…ကှယျ…. တုနျတုနျရငျရငျလေး ပွောရငျး လီးတနျကွီးကို ပါးပွငျလေးနှငျ့ ဖိကပျကာ ပှတျလှိမျ့ရငျး ကကြေနြေပျနပျလေး ကွညျနူးနရှောသညျ..။ မခငျြ့မရဲ ဖွဈလာသော မမဖွူက လီးထိပျကို နှုတျခမျးလေးမြားဖွငျ့ ပွှတျခနဲ တဈခကျြ စုပျနမျးလိုကျရာ ဂှေး စကွေီ့းနှဈလုံးက ကြုံ့ခနဲ အပျေါသို့ လိမျ့တကျသှားသညျ..။
မမဖွူသညျ လီးထိပျက အရပွေားကို အောကျသို့ ဆှဲခလြိုကျပွီး အညိုရောငျသနျးနသေော လီးထိပျကွီးကို လြှာဖြားလေးဖွငျ့ တို့ထိ ကစားလိုကျသညျ..။ လကျထဲ၌ ဆုပျထားသော လီးတနျကွီးက တငျးခနဲတငျးခနဲ ထကွှသှားပွီး အကွောကွီးတှေ ထောငျထသှား လသေညျ..။ မမဖွူ၏ လြှာဖြားလေးက လီးထိပျရှိ အရကွေညျလေးတှေ ထှကျနသေော အပေါကျလေးထဲသို့ ဆတျခနဲ နအေောငျ ထိုးလိုကျသော အခါ… အာ့….အ….မမ….အား……. အငျ့…အှနျ့..အိ.အှနျ့….. ဖိုးခြိုက ရုတျတရကျ မထိနျးခြုပျနိုငျတော့ပဲ သူ၏ လီး တနျကွီးကို မမဖွူ၏ နှုတျခမျးနှဈလှာကွားသို့ ဆောငျ့၍ ထိုးထညျ့လိုကျမိ လတေော့သညျ..။ မမဖွူ၏ ပါးစပျထဲ လီးကွီးက ကွပျ သိပျစှာဝငျသှားပွီး လီးထိပျက အာခေါငျကို သှား၍ ထိုးမိလရော အသကျရှူပငျ မှားသှားရလသေညျ..။ ဖိုးခြိုကတော့ မမဖွူရဲ့ ခေါငျးလေးကို စုံကိုငျလကျြ ဆောငျ့ကာဆောငျ့ကာ လိုးပဈလိုကျသညျ..။ မမဖွူ မကျြနှာလေး နီရဲကာ မကျြရညျလေးမြား ဝိုငျးသှား ပွီး ဖိုးခြို၏ လမှေးအုံကွီးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျတှနျးကာ ခေါငျးကို နောကျသို့ ဆှဲကာ ရုနျးဖယျလိုကျရလသေညျ..။ ထိုအခါကြ မှ ဖိုးခြို၏ လီးတနျကွီးက မမဖွူ လကျထဲမှ ပွှတျခနဲ လှတျထှကျသှားရလသေညျ..။
သှား……ဘာလုပျမှနျး မသိဘူး…..ဆိုးလိုကျတာ…… မမဖွူ မကျြနှာနီလကျြ ဖိုးခြိုကို မကျြစောငျးလေးထိုး၍ ပွောသညျ..။ ဖိုးခြို ကမနျးကတနျး ထိုငျခလြိုကျကာ မမဖွူ၏ ပခုံးလေးနှဈဖကျကို ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ..။ ကနြျော စိတျမထိနျးနိုငျလို့ပါ….မမဖွူရာ… မငျး စိတျမထိနျးနိုငျတာကလဲ ..ငါ့မှာ အသကျတောငျ ဘယျလိုရှူရမှနျး …မသိဘူး…. ဖိုးခြိုက မမဖွူရဲ့ ပါးကို ဘယျပွနျညာပွနျ ညငျသာစှာ နမျးလိုကျသညျ..။ ဒေါပှနသေော အပြိုကွီး မမဖွူ တဈယောကျ ကနြေပျသှားရလသေညျ..။ တျောပွီ….. မစုပျပေးတော့ ဘူး…. မမကို ကနြျော ယကျပေးမယျ…နျော…. အို…………မလုပျနဲ့….ဟငျ့အငျး…….ဟငျ့အငျး…….. အဲဒီလို လုပျပွီး…နှူးနှပျထားမှ လုပျတဲ့အခါကတြော့ မမဖွူလဲကောငျး ကနြျောလဲ ကောငျး…… အံမယျ…..မငျးလုပျတာကို ဘယျသူက ခံမယျ ပွောနလေို့လဲ….ရီရ တယျ…တော့…ခဈခဈ….ခဈ.. ဖိုးခြို တငျးသှားသညျ..။ လီးကွီးက တဆတျဆတျ တုနျနသေညျ..။ တှကွေ့သေးတာပေါ့….ဟု စိတျ ထဲက ရရှေတျပွီး ဒူးထောကျထိုငျနသေော မမဖွူကို အိပျယာပျေါဆှဲလှဲ လိုကျသညျ..။ အားဖွငျ့ ဆှဲလှဲလိုကျပမေယျ့ မမဖွူက ရုနျး၍ တောငျ့ထားသဖွငျ့ ပုံလကျြသား လဲကမြသှား..။ ဖွဈသလို ဝတျထားသော ထဘီက ကြှတျကသြှားပွီး လူက အိပျယာပျေါ လကျထောကျမိကာ လေးဖကျကုနျးလကျြသားလေး ဖွဈသှားရသညျ..။
ဖိုးခြိုက ဖွတျခနဲ သူမနောကျသို့ ဒူးထောကျဝငျလိုကျပွီး မမဖွူ၏ ကြောကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဖိကာ လီးထိပျနဲ့ တထေ့ောကျလိုကျ သညျ..။ အဲ့…ဟဲ့….အဲဒါ ….ဖငျနျော….အပေါကျမှားပွီး ထိုးမထညျ့လိုကျနဲ့…..နအေုံးလေ…. ဖိုးခြိုက ဖငျဝကို လီးထိပျကွီးဖွငျ့ တ ရှရှ မှနှေောကျပေးလိုကျရာ မမဖွူဖငျကွီး ကော့ထောငျ၍ လာသညျ..။ ဟဲ့….အို…ဖငျ..ဖငျကို မလုပျနဲ့…..နျော……… မမဖွူ ပွော နစေဉျ ဖိုးခြိုက စအိုဝကို လီးထိပျဖွငျ့ မှမှေပေေးရငျး လကျတဈဖကျက ဖငျကွားအောကျမှ နောကျဖကျသို့ ပွူးထှကျနသေော စောကျဖုတျကွီးကို ဆှဲပှတျလိုကျရငျး လကျခြောငျးဖွငျ့ စောကျစလေ့ေးကို ခြိတျခြိတျပွီး ဆှပေးလိုကျသညျ..။ အား…..ကြှတျကြှတျ….အိုး…အိုး………. မမဖွူ ဖငျကွီး ဆတျခနဲဆတျခနဲ ကော့ကော့ တကျသှားသညျ..။ ဖိုးခြိုက အစလေ့ေးကို လကျညှိုးဖွငျ့ ဖိ၍ ဆှဲနစေဉျ သူ့လီးကွီးကလညျး စအိုဝလေးကို မနားတမျး ပှတျပေးနသေညျ..။
ရှီး…..အ….ကြှတျ..ကြှတျ….အားလားလား…………..ဟငျး…အငျး……….. မမဖွူ၏ ဖငျကွီးက ရမျးခါနသေညျ..။ စောကျရညျ ကွညျမြားကလညျး ပေါကျခနဲ ပေါကျခနဲ…ယိုစီးကြ၍လာသညျ..။ အငျး..အိုး..အိုး…………အ..အ…အား….ဟငျး………….. မမ ဖွူ၏ ကော့ထောငျနသေော ဖငျကွီးက ဟိုရမျးသညျရမျး နိမျ့လိုကျမွငျ့လိုကျ ဖွဈနသေညျ..။ ဖိုးခြို၏ လီးထိပျမှာလညျး အရညျ ကွညျလေးတှေ စိမျ့ထှကျလာသညျ..။ ဖိုးခြို က မမဖွူ၏ စောကျပတျအဝ ဝိုငျးဝိုငျးလေးကို ဖွဲ၍ လီးကွီးကို တသှေ့ငျးလိုကျသညျ..။ ရှုံ့ထားသောကွောငျ့ မမဖွူ၏ စောကျပတျက တငျးကဈြနပွေီး လီးထိပျကွီးကို ဖမျးညှဈထားရာ ဖိုးခြိုမှာ အားစိုကျလကျြ ဆောငျ့ခြ လိုကျသော အခါတှငျမှ လီးဒဈကွီးက ကြှံဝငျသှားရလသေညျ..။
အား…..အား….ဖွေး ဖွေး…..အမလေး…..လေး………….. လီးက ကွီးလှနျးတော့ ခံရတာ မသကျသာလှခြေ…။ ဖိုးခြိုကလညျး လီး ဒဈဝငျသှားပွီး နူးညံ့စိုအိသော စောကျခေါငျးအတှကေို့ ရသှားသညျနှငျ့ လီးကို ခပျဖိဖိလေး ဆောငျ့ဆောငျ့ပွီး လိုးလိုကျသညျ..။ အငျး….. ဟူသော အသံရှညျလေးဆှဲရငျး မမဖွူမှာ ရှမှေ့ထောကျထားသော လကျနှဈဖကျက ပြော့၍ ကှေးပွီး ဝပျကသြှားလေ သညျ..။ ဗွဈ…ဘှပျ….စှပျ….ဖလှတျ…… ဟငျ့ …ဟငျ့….အငျ့…ဟငျ့….အိုး………..အို….အငျ့….. စောကျပတျအုံကွီးကသာ မ တရားထှားကားနသေျောလညျး စောကျခေါငျးပေါကျက ကဉျြးကဉျြးလေး ဖွဈသောကွောငျ့ ကွီးမားလှသော ဖိုးခြို၏ လီးကွီးမှာ အရသာတှလှေ့သညျ..။ ဆကျကာဆကျကာ ဆောငျ့လိုးလိုကျရာ မမဖွူရဲ့ ဖငျကွီးမှာ လှုပျခနဲ လှုပျခနဲ ဖွဈသှားရာမှ တုနျတုနျသှား သညျ..။ စောကျပတျအုံကွီးက ပို၍ နောကျသို့ ပွူးလာပွီး ခံအားကလညျး ကောငျးနသေောကွောငျ့ ဖိုးခြို၏ လိုးအားကလညျး ပို၍ ထနျလာရတော့သညျ.။ ထိသလား မမေးနဲ့..တဈခကျြဆို ဆိုသလောကျ ပဈပဈနှဈနှဈ ဆောငျ့ခလြိုကျတိုငျး စောကျစလေ့ေးမှာ ကငျြ တကျသှားသညျ..။
ဗွဈ….ဒုတျ….. ဟူသော အသံမြိုးလေးသာ နားထဲဝငျလာလို့ကတော့ ဆိမျ့ကငျြသှားအောငျ ကောငျးပွီး အသဲကို စှဲသှားတတျလေ သညျ..။ ဖိုးခြိုက ခပျကွမျးကွမျးလေး လေးငါးခကျြလောကျဆောငျ့လိုကျ မှေးပွီး ခပျဖှဖှလေး ဆှဲဆှဲထုတျလိုကျ ဖွေးဖွေးလေး သှငျးလိုကျ စောကျပတျညှဈအားလေးကို ခံစားလိုကျဖွငျ့ အမြိုးမြိုးလုပျခငျြတိုငျး လုပျပွီးနောကျ မမဖွူ၏ ဖငျကွီးကို ပှတျကာ သပျ ရငျး ခပျကွမျးကွမျး ခပျသှကျသှကျကွီး ဆောငျ့ပါတော့သညျ..။ ပွှတျ…ဘှပျ….ဗွဈ….ဒုတျ….ဒုတျ….အ..အငျ့ဟငျ့….အငျ့…ပ လှတျ……ဒုတျ…. မမဖွူကလညျး သူမ၏ ဖငျကွီးကို အားကွိုးမာနျတကျနောကျသို့ ပွနျပွနျကော့ပေးနသေညျမှာ ဖငျကွောကွီး မြား ထောငျလာသညျအထိပငျ ဖွဈသညျ.။ ဘှတျ….ပလှတျ…..မမ……ဗွဈ….ဒုတျ…လုပျ…လုပျ….အငျး…..ဟငျ့….ဟငျး….. အငျး…… အသံရှညျလေးဆှဲရငျး မမဖွူတဈယောကျ ခေါငျးထောငျကာ ဖငျကွီးရမျးသှားခြိနျမှာတော့ ဖိုးခြိုကလညျး သူ့လီးကွီးကို အဆုံးစိုကျသှငျးပွီး အရမြေားကို ပနျးပွီးထညျ့လိုကျပါတော့သညျ..။
ကိုစံဖေ…..ကိုစံဖေ…….. အသံကို ခပျအုပျအုပျချေါကာ မခငျလှက စံဖကေို လှုပျနှိုးသညျ..။ စံဖေ တုတျတုတျမြှ မလှုပျပေ…။ တ ရှူးရှူးဖွငျ့ အိပျမောကနြသေညျ..။ ကြှတျ….ဒီနေ့ လြှော့သောကျပါလို့ ပွောထားတဲ့ ဥစ်စာ..အိပျနလေိုကျတာ..သနေတေဲ့ အတိုငျး ပဲ….. အတျောပငျ ဒေါသထှကျလှနျး၍သာ မခငျလှ ဒီလို မွညျတှနျတောကျတီးလိုကျရခွငျး ဖွဈသညျ..။ အမှနျက ကိုစံဖကေ မခငျလှ ထကျ အသကျ ဆယျနှဈမြှ ကွီးသညျ…။ မခငျလှအသကျက ခုမှ ၃၀ ထဲ ရောကျရုံသာ ရှိသေးသညျ..။ သှေးသားအဆူဖွိုးဆုံး အရှယျ ဟု ပွောရမညျဖွဈသညျ..။ တဖွေးဖွေး အရကျ၏ ကြေးကြှနျဖွဈလာသော စံဖကေ သူ့ထကျအမြားကွီးငယျပွီး ဆူဆူဖွိုး ဖွိုး လှပတောငျ့တငျးသော မခငျလှကို ပငျ ဂရုမပွုနိုငျအားတော့ မူးပွီးရငျးသာ မူးနခေဲ့သညျ..။ စိတျရှညျရှညျဖွငျ့ စောငျ့စားခဲ့ပေ မယျ့ မနနေိုငျတော့သညျ့အဆုံး မခငျလှ ဒီနေ့ အရကျကို လြှော့သောကျလာခဲ့ဖို့ နဲ့ ကမြနဲ့လဲ အေးအေးဆေးဆေး နပေါအုံး ဆိုတဲ့ စကားကို ပွောထှကျကာ မှာလိုကျပေးမယျ့ စံဖေ ဘယျလောကျတောငျ သောကျလာသညျ မသိ ။ ပွနျရောကျလာကထဲက အိပျယာ ထဲ အလြားထိုးဝငျကာ အိပျလတေော့သညျ..။
မခငျလှကလညျး ဒီနမှေ့ စံဖေ၏ နောကျသို့ လိုကျ၍ မသှားဖွဈ…။ အိမျမှာ ဖွူဖွူ က မရှိ..။ သူတို့၏ ညီမ ဝမျးကှဲမြား အလညျ လာ၍ ပွနျသှားသော ပဲခူးသို့ ဖွူဖွူက လိုကျပါသှားခဲ့သညျ..။ နှဈရကျသုံးရကျလောကျနမှေ ပွနျလာမညျဖွဈ၍ ဖိုးခြိုနဲ့ သူမအတှကျ ညစာကို ခကျြရပွုတျရသေးသညျ..။ သကျပွငျးအခါခါ ခရြငျး ခွငျထောငျထဲ တှငျ ငုတျတုတျထိုငျလကျြ အိပျပြျောနသေော စံဖကေို စိတျပကျြလကျပကျြ ကွညျ့နမေိသညျ..။ မခငျလှ စိတျကတော့ မလြှော့ခငျြသေးပါ..။ ဘယျလိုလုပျရငျကောငျးမလဲဟု တှေး နမေိသညျ..။ နောကျဆုံးကွိုးစားသညျ့အနဖွေငျ့ မခငျလှက ပွလြေော့နသေော စံဖေ၏ ပုဆိုးကို ပေါငျလညျလောကျအထိ ဆှဲခြ လိုကျသညျ..။ မဲနကျနသေော ဥကွီးတှပေျေါတှငျ စငျးစငျးကွီးဖွဈနသေော လီးခြောငျးကွီးက ပြော့တှဲတှဲကွီး..။ မခငျလှ လကျညှိုး လကျမတို့ဖွငျ့ ညှပျ၍ လီးခြောငျးကွီးကို မလိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ လကျဖဝါးဖွငျ့ အောကျမှ ပငျ့ကိုငျလိုကျပွီး ပြော့တှဲတှဲ လီးခြောငျး ကွီးကို ဆုတျကိုငျလိုကျသညျ..။ ထို့နောကျ အပျေါက အရပွေားကို ဆှဲတငျဆှဲခဖြွငျ့ လုပျပေးသညျ.။
ခဏကွာတော့ လီးက မာသလိုလို ဖွဈလာသညျ..။ အရညျပွားဆှဲခလြိုကျတော့ ပွဲပွဲသှားသော လီးထိပျကွီးကို ကွညျ့ရငျး မခငျ လှ၏ စိတျတှကေ ပို၍ ထလာသညျ..။ စံဖေ၏ မကျြနှာကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ စံဖကေ မနိုးသေး..။ အိပျ၍ ကောငျးနဆေဲပငျ…။ အရပွေားဆှဲခလြိုကျ၍ ပျေါလာသော ဒဈကွီးကို လကျမထိပျလေးဖွငျ့ ဖှဖှလေး ပှတျပေးသညျ..။ လီးခေါငျးကွီးက ပှသလိုဖွဈလာ ပမေယျ့ လီးတနျကွီးကတော့ မထူးခွား ပြော့ခှနေဆေဲသာ ဖွဈသညျ..။ လီးကို အသာဆုပျ၍ ရှတေို့းနောကျငငျဖွငျ့ ခပျကွမျးကွမျး လေး ဂှငျးတိုကျပေးသညျ..။ ထိုသို့လုပျရငျး စံဖေ၏ မကျြနှာကိုလညျး လှမျးလှမျးကွညျ့သညျ..။ စံဖကေ တုပျတုပျမြှ မလှုပျသလို သူ့ လီးကလညျး နိုးထလာခွငျး မရှိပေ..။ မနနေိုငျ မထိုငျနိုငျဖွဈနသေော မခငျလှ၏ ပေါငျကွား၌သာ အရညျတှကေ ရှဲသထကျ စိုရှဲလာ သညျ..။
ကြှတျ…မသာကွီး….သနေလေိုကျတာ….. မခငျလှ စိတျပကျြ၍ လီးကို လကျထဲမှ လှတျခလြိုကျသညျ..။ စိတျပကျြလကျပကျြဖွငျ့ စံ ဖကေို ကြောခိုငျးလိုကျပွီး ရငျလြားထားသော ထဘီကို ဆှဲတငျ၍ ဝတျလိုကျသညျ..။ ဟုတျပါသညျ..။ မခငျလှက စောစောက စံဖေ ကို နှိုးတော့မညျဟု ကွံကထဲက အဝတျအစားတှကေို ခြှတျကာ ထဘီကို ရငျလြားထားခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ..။ ဒါမှ စံဖနေိုးလာ၍ အလုပျဖွဈလငျြ လှယျကူမညျသညျ..။ပေါငျကွားမှ ထှကျနသေော အရညျမြားကို အိမျသာသို့ဝငျ၍ ရဆေေးသညျ..။ ပွီးတော့ အဝတျအစားပွနျဝတျကာ ကြိတျမှိတျအိပျတော့မညျဟူသော အတှေးဖွငျ့ မခငျလှ ခွငျထောငျကို မ၍ ထှကျကာ အိပျခနျးထဲထှကျပွီး အိမျနောကျဖေးဖကျသို့ လြှောကျလာခဲ့သညျ…။ ထိုသို့ လြှောကျလာရငျး ခွရေငျးဖကျတှငျ ခွငျထောငျထောငျ၍ အိပျနသေော ဖိုး ခြို၏ ထံသို့ မခငျလှ၏ မကျြလုံးက ရောကျသှားသညျ..။
ဟငျး……အတျောအအိပျဆိုးတဲ့ ကောငျလေး….. ဟုတျပါသညျ..။ ခွငျထောငျထဲတှငျ အိပျနသေော ဖိုးခြိုက ခွငျထောငျကို ကနျ့လနျ့ ကွီး အိပျနကော ခါးအောကျပိုငျး ကိုယျတပိုငျးက ခွငျထောငျအပွငျဖကျသို့ ရောကျနသေညျ..။ ပွီးတော့ ပုဆိုးက ခါးတှငျ မရှိ..။ ဒူးဆဈအထိ လြှောကနြသေညျ..။ မွငျလိုကျသော မခငျလှ သူမဘာသာပငျ သတိမထားမိလိုကျပဲ ဖိုးခြိုး၏ အနားသို့ ရောကျသှား ကာ အနီးကပျ ငုံ့၍ ကွညျ့လိုကျမိသညျ..။ ဟယျ……နညျးတာကွီး မဟုတျဘူး….. မခငျလှ တဈယောကျတညျး တိုးတိုးလေး တုနျတုနျခိုကျခိုကျ လေး ပွောလိုကျမိသညျ..။ မဲနကျလုံးတဈနသေော ဂှေးဥကွီးက နဲတာကွီး မဟုတျသလို မာမာတောငျ့တောငျ့ဖွဈ နသေော လီးကွီးကလညျး အကွီးကွီးပဲ….။ ကိုစံဖေ၏ လီးထကျ သိသိသာသာကွီးကို ကွီးကွောငျး မခငျလှ တှေးလိုကျသညျ..။
ဗွုနျးဆို မခငျလှ ငုတျတုတျထိုငျခလြိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ ခွငျထောငျထဲသို့ နားစှငျ့လိုကျတော့ ဖိုးခြိုက တရှူးရှူး အိပျမောကြ နသေညျ..။ ရှညျရှညျဝေးဝေး မစဉျးစားခငျြတော့ပဲ မခငျလှ၏ လကျတဈဖကျက ဖိုးခြို၏ လီးကွီးကို ဆုပျကိုငျလိုကျသညျ..။ ကိုငျ လိုကျသော လကျက တုနျတုနျရငျရငျဖွဈနပွေီး လကျထဲက လီးကွီးကတော့ တဒိတျဒိတျ သှေးတိုးနသေညျ..။ လကျဖွငျ့ ဆုပျထားဆဲ မှာပငျ လီးကွီးက တငျးခနဲ တငျးခနဲ ဖွဈကာ ကွီး၍လာသညျ…။ ဟယျ….သနျလိုကျတဲ့ ဟာကွီး….. ပူနှေးမာကြောလှသော လီး ကွီး၏ အတှကေ့ မခငျလှအား အရာရာကို မသှေ့ားစသေညျ..။ လကျတဈဖကျက လီးခြောငျးကွီးကို ကိုငျရငျး ကနျြသော လကျ တဈဖကျက လုံးတဈနသေော ဂှေးဥကွီးကို အောကျမှနေ၍ ပငျ့မကာ ကိုငျလိုကျသညျ..။
ပွီးတော့ ဂှေးဥကွီးကို ဖှဖှလေး ဆုတျဆုတျပွီး ညှဈကွညျ့နမေိသညျ..။ ကနျြလကျတဈဖကျအတှငျးမှ လီးခြောငျးကွီးကတော့ စံခြိနျ လှနျအောငျပငျ မာတောငျ့လာပွီး ဆုတျကိုငျထားသော မခငျလှ၏ လကျထဲမှ ရုနျးကနျထှကျနသေယောငျ ..တဆတျဆတျတုနျခါ၍ လာရသညျ…။ ထကွနသေော သှေးသားမြားနှငျ့ ထိတှနေ့ရေသော အထိအတှမြေ့ားကွောငျ့ မခငျလှမှာ တဈလောကလုံးကို မသှေ့ား ခဲ့ရပွီ..။ လီးပျေါမှ လကျကို လှတျလိုကျတော့ ဖိုးခြို၏ ဧရာမလီးကွီးက မိုးကိုမြှျောကာ ထောငျမတျလကျြ လီးခေါငျးကွီးက တ ဆတျဆတျဖွဈနသေညျ..။ သညျလီးကွီးကို တရှိုကျမကျမကျ ကွညျ့ရငျး မခငျလှ ဖိုးခြို၏ ဘေးတှငျ ဒူးထောကျထိုငျခလြိုကျရာမှ ရငျဘတျတှငျ စညျးနှောငျထားသော ရငျလြားထားသညျ့ ထဘီကို ဖွညျ၍ ခြှတျခလြိုကျသညျ..။ ပွီးတော့ ဒူးကို တဈဖကျစီကွှပွီး ထဘီကို ကှငျးလုံးကြှတျသှားအောငျ ခြှတျပဈလိုကျသညျ..။ ဖှေးနှဈလုံးတဈနသေော နို့ကွီးနှဈလုံးနှငျ့ မခငျလှတဈယောကျ အသကျရှူသံတှေ ပွငျးနပွေီ…။ ရငျအစုံက နိမျ့ခညျြမွငျ့ခြီ ဖွဈနသေညျ..။
မခငျလှ အလိုလိုနရေငျး မောနသေညျ..။ တုနျရငျနသေော လကျခြောငျးလေးမြားဖွငျ့ တဆတျဆတျဖွဈနသေော လီးကွီးကို လှမျး၍ ဆုပျကိုငျလိုကျကာ ဖိုးခြို၏ ခါးဆီသို့ ခှတကျလိုကျသညျ…။ သညျအခိုကျမှာပငျ ခွငျထောငျက လှုပျခနဲ လနျတကျသှားပွီး ကွုံးထ၍ ထိုငျလိုကျသော ဖိုးခြိုက သူ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ကုနျးကုနျးကှကှဖွဈနသေော မခငျလှကို သိမျး၍ ဖကျကာ အိပျယာပျေါသို့ လှဲခလြိုကျသညျ..။ အို….ဟဲ့….ကောငျလေး….ခှေးလေး….နိုးနရေကျသားနဲ့….ဟဲ့…လှတျ…လှတျ…..အို……လှတျ ဆို…… ရှကျရမျးရမျး၍ ပွောနသေျောလညျး မရုနျးပါ…။ ရုနျး၍လညျး မရပါ…။ ဖိုးခြိုက ကဈြကဈြပါအောငျ ကွုံး၍ ဖကျထားတော့ မခငျ လှ အသကျရှူပငျ မရခငျြတော့…။ ဖိုးခြိုက မခငျလှ၏ နို့ကွီးနှဈလုံးကို ငုံ့ကွညျ့သညျ..။ ဖှေးနှဈနသေော နို့ကွီးတှကေ မမဖွူ၏ နို့ တှထေကျ နှဈဆခနျ့ကွီးသညျ..။ အားရစရာကွီးပငျ…။ နို့သီးတှကေလညျး ခပျထှားထှား…။ နို့တဈလုံးကို ငုံ၍ အငမျးမရ စို့လိုကျ သညျ..။
အ…..ကြှတျ ကြှတျ….. မခငျလှ ရငျဘတျပငျ ကော့တကျသှားရသညျ..။ တျောတျော နို့စို့သနျတဲ့…ကောငျလေး….. သနျလိုကျတာမှ ရငျခေါငျးထဲအထိပငျ တစဈစဈ ဖွဈသှားရအောငျ စို့ပဈနသေညျ..။ တအားစို့လတေော့ ခံရတဲ့သူက ကငျြခနဲ ကငျြခနဲ နာနာသှားပွီး နို့ရညျကွညျတှကေ တစိမျ့စိမျ့ထှကျလာသညျ..။ ထိုနို့ရညျကွညျတို့၏ ခြိုမွိနျသော အရသာကိုပငျ ဖိုးခြိုက ခုံမငျနသေညျ…။ နောကျထပျ နို့တဈလုံးကို ပွောငျးစို့ရငျး ဖိုးခြို၏ လကျတဈဖကျက မခငျလှ၏ ပေါငျကွားသို့ ရောကျသှားသညျ…။ ဟဲ့…..အို အို…..လကျကွီးနဲ့……. မခငျလှ ပေါငျနှဈလုံးကို အတငျးစသေ့ညျ..။ ဒါပမေယျ့ သူမထကျမွနျသော ဖိုးခြို၏ လကျက စောကျဖုတျ ကွီးကို အမိအရ ဖမျးဆုတျမိနပွေီ…။ ထှကျနသေညျ့ အရညျတှကေ အဆမတနျ ဖောငျးကားနသေော စောကျဖုတျကွီးသာ မက ပေါငျတှငျးသားတှထေိပါ ရှဲနဈနသေညျ..။ ရဖွေငျ့ လောငျးထားသလားပငျ အောကျမရေ့သညျ..။
သူ့အကွောငျးကို သူသိသော မခငျလှ အတျောရှကျသှားသညျ..။ မကျြနှာကို တဈဖကျသို့ စောငျး၍ လှဲထားလိုကျမိသညျ..။ အ… အ….ကြှတျ ကြှတျ……အငျး…..ဟငျး…… ဖိုးခြိုက မခငျလှ၏ နို့သီးကို နို့အုံကွီး ရှထှေ့ကျလာအောငျ နှုတျခမျးနှငျ့ ညှပျ၍ ဆှဲလိုကျ ပွီးမှ အားကုနျစုပျ၍ စို့လိုကျခွငျးဖွဈသညျ..။ ဆန်ဒတှေ ပွငျးလှနျးလာသဖွငျ့ မခငျလှ တဈကိုယျလုံး ကတုနျကရငျကွီး ဖွဈလို့လာရ လသေညျ..။ ကဲ….အဈမ စောစောက အပျေါက တကျပွီးလုပျမလို့မို့လား….လုပျတော့လေ…… ပွောလဲ ပွော ဖိုးခြိုက မခငျလှ၏ ကိုယျပျေါမှ လှိမျ့ဆငျးကာ ပကျလကျလှနျခလြိုကျသညျ..။ ဖိုးခြို၏ ကွီးမားလှသော လီးကွီးက အကွောပွိုငျးပွိုငျးဖွငျ့ တောငျမတျ လကျြ ရှိသညျ..။ ဟှနျး….တျောတျော အသကျသာခို…. မခငျလှက ပကျလကျလှနျနရောမှ လီးကွီးကို မကျြလုံးလေးစှကော ကွညျ့ နရောမှ ပွောလိုကျပွီး ထ၍ ထိုငျလိုကျသညျ.. ။ ပွီးတော့ ဖိုးခြို၏ ခါးပျေါသို့ တကျခှလရော ဖိုးခြိုက ပွုံးဖွီးဖွီးနှငျ့ သူမကို ကွညျ့နေ ကွောငျး တှလေို့ကျရတော့ မခငျလှ မကျြနှာလေး ရဲသှားသညျ..။
ကွညျ့မနနေဲ့….မကျြလုံးမှိတျထား……. ခပျဆတျဆတျလသေံနှငျ့အတူ လကျတဈဖကျက လီးကွီးကို လှမျးကိုငျလိုကျသညျ..။ ပွီး တော့ ဖိုးခြိုမကျြလုံးမှ မှိတျထားရဲ့လားဟု ကွညျ့လိုကျရာ ပွောထားသညျ့အတိုငျး မကျြလုံးမှိတျထားသညျကို တှရေ့၍ မခငျလှသညျ လကျထဲမှ လီးကွီးထိပျဖွငျ့ သူမ၏ စောကျပတျကွီးထိပျရှိ စောကျစကေို့ ဖိဖိပွီး ပှတျသညျ..။ ထိုသို့ ပှတျရငျး မခငျလှ၏ ပါးစပျလေး က ဟ၍ဟ၍ သှားသညျ.။ စောကျစကေို့ လေးငါးကွိမျမြှ ပှတျပွီးသောအခါတှငျမှ လီးထိပျကွီးကို စောကျပတျဝတှငျ တွေ့ပီး မ ခငျလှ တဖွေးဖွေး ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျခသြညျ..။ ထိုသို့ လီးကို စောကျပတျထဲ သှငျးရငျး မခငျလှ၏ ပါးစပျလေး ဟ၍ သှားရုံမက လညျပငျးကွောလေးမြား ထောငျအောငျပငျ သူမ၏ မကျြနှာလေးက မော့၍ သှားသညျ..။ ဟငျး ဟငျး….ကွီးလိုကျတဲ့ ဟာကွီး ကှယျ….ဟငျး…..ဟငျး…. သူမဘာသာ ငွီးတှားရငျး ဖွေးဖွေးခငျြးထိုငျခကြာ လီးကိုသှငျးယူသညျ..။ လီးတနျကွီး တဆုံးဝငျရနျ လကျနှဈလုံးလောကျအလိုတှငျတော့ အောကျမှ ဖိုးခြိုက ခါးကိုဆတျခနဲ ကော့ကာ လီးကိုဆောငျ့၍ သှငျးလိုကျသညျ..။
ဗွဈ….အမလေး…ကြှတျ…လနျ့လိုကျတာ….မကျြလုံး ဘာလို့ဖှငျ့တာလဲ..ပွနျမှိတျထား…. စောကျခေါငျးထဲသို့ လီးခြောငျးကွီးတဈခု လုံး တဆုံးဝငျသှားတော့ မခငျလှက ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျလကျြမှပငျ ဇကောဝိုငျးပွီး နှဲ့ နှဲ့ပှတျပေးသညျ..။ ပွီးတော့မှ ဒူးထောကျထိုငျ ခလြိုကျပွီး ခန်ဓာကိုယျအပျေါပိုငျးကို ဖိုးခြို၏ ကိုယျပျေါသို့ မှောကျခကြာ ဖငျကွှပွီး တဈခကျြခငျြး ဆောငျ့၍ လိုးသညျ..။ ဗွဈ….ပ လှတျ….ဖှတျ……ဗွဈ …ဗွဈ……… ဖိုးခြိုက ခေါငျးထောငျထ၍ မခငျလှ၏ နို့ကွီးနှဈလုံးအား တဈလုံးကိုဆှဲ၍ တဈလုံးကို အားရပါးရ စို့သညျ..။ ပွှတျ….စှတျ…..တတျလဲတတျနိုငျတဲ့ ကောငျလေး…..ဟငျး..ဟငျး……ပွှတျပွှတျ…… မခငျလှ၏ ဆောငျ့ ခကျြက တဈခကျြခငျြး လေးလေးမှနျမှနျနှငျ့ ဆောငျ့သညျ..။ ပွီးလငျြ လေးငါးခကျြလောကျ ဆောငျ့လိုကျ စောကျပတျဝကို လီးအရငျး တှငျ ကပျ၍ နှဲ့လိုကျနှငျ့ လိုးသညျ..။ ထိုသို့ဆောငျ့၍ လိုးရငျး မခငျလှ၏ မကျြလုံးလေးတှကေ စငျး၍ ကသြှားရသညျ..။
တဈခကျြခငျြး လေးလေးနှငျ့ မှနျမှနျဆောငျ့လိုးရငျး အရသာခံကာ ဇိမျယူနသေော မခငျလှမှာ ခဏအကွာတှငျ အသကျရှူသံတှေ ပွငျးလာပွီး မောသံပေါကျလာသညျ..။ တဈခကျြခငျြး လိုးနသေောကွောငျ့ အောကျမှ ဖိုးခြိုကလညျး အားမရနိုငျ ဖွဈလာသညျ..။ မခငျလှ၏ ဆောငျ့ခကျြတိုငျး လီးကိုခပျပွငျးပွငျး အောကျမှ ပငျ့ပငျ့ဆောငျ့ပေးလိုကျတော့ မခငျလှမှာ တအငျ့အငျ့နှငျ့ ဖွဈလာရုံမက ဟငျးခနဲ ဟငျးခနဲ လအေံသံလေးတှပေါ ထှကျလာသညျ..။ အားမရနိုငျသော ဖိုးခြိုတဈယောကျ သူ့စိတျတိုငျးကြ အားပါးတရ ဆော ငျ့လိုးခငျြစိတျက ပွငျးသထကျ ပွငျးလာသညျ..။ ပွှတျ…ပွှတျ…..အငျး…..ဗွဈ…..ဟငျ့ဟငျ့….. အဈမမောရငျ ကနြျော တလှညျ့ လိုး ပေးအုံးမယျ….နျော… အငျး….. မခြှတျနဲ့ ….မမ… မခငျလှက စောကျပတျထဲမှ လီးကိုခြှတျ၍ ဘေးကိုပကျလကျလှနျခတြော့မညျ့ အလုပျ ဖိုးခြိုက အခြိနျမှီ ပွောလိုကျရငျး မခငျလှကို တငျးကွပျစှာဖကျလိုကျပွီး လီးကွီးကို စောကျခေါငျးထဲသို့ တဆုံးဖိကပျ၍ သှငျး ထားလိုကျသညျ..။
ထို့နောကျတှငျမှ ဖကျလကျြသား မခငျလှကို ဘေးသို့ ပကျလကျလှနျခလြိုကျရငျး ဖိုးခြိုက မခငျလှ၏ ကိုယျပျေါတှငျ ပါသှားသညျ..။ မခငျလှ၏ ကြောပွငျလေး အိပျယာနှငျ့ ထိသညျနှငျ့ ဖိုးခြိုက ဒူးထောကျလိုကျသညျ..။ ထိုအခါတှငျတော့ သူတို့နှဈယောကျမှာ လှေ ကွီးထိုး ပုံစံဖွဈသှားပွီး မခငျလှက ပကျလကျလှနျလကျြ ဒူးထောငျပေါငျကားလုပျထားပွီး ဖိုးခြိုက သူမ၏ ထောငျထားသော ပေါငျ နှဈခြောငျးကွားတှငျ ဒူးထောကျလကျြ ရှိနသေညျ..။ ပုံစံပွောငျးခွငျးကွောငျ့ မခငျလှ၏ စောကျခေါငျးထဲသို့ တဆုံးထညျ့ကာ ဖိ ကပျထားသော ဖိုးခြို၏ လီးကွီးမှာ အပွငျသို့ တဝကျခနျ့ထှကျနလေသေညျ..။ ထိုအပွငျသို့ တဝကျခနျ့ထှကျနသေော လီးကွီးကို ဖိုး ခြိုက တဈခကျြထဲနှငျ့ ဆောငျ့၍သှငျးလိုကျသညျ..။
ဗွဈ…..ဒုတျ….အ……အမေ့…….အီး….အငျ့…… မခငျလှ၏ ဝတျလဈစလဈ ကိုယျလုံးလေး သိမျ့ခနဲလှုပျသှားသညျ..။ ဖိုးခြိုက မခငျ လှ၏ နို့နှဈလုံးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ လှမျး၍ဆှဲကိုငျကာ လီးတနျကွီးကို တဆုံးနီးပါး ထုတျ၍ အားပါးတရ ဆောငျ့၍လိုး တော့သညျ..။ ပွှတျ….ဗွဈ……ဒုတျ…..အငျ့.အဟငျ့…….ပွှတျပွှတျ……. မခငျလှကလညျး အောကျမှနေ၍ အငွိမျမနေ ဖိုးခြို၏ ဆောငျ့ခကျြနှငျ့ အညီ စောကျပတျကွီးကို ကော့၍ကော့၍ ပေးနရေုံမြှမက တဈခကျြတဈခကျြလညျး ကော့ ဝိုငျးဝိုငျးပေးသညျ..။ ဖိုးခြို၏ဆောငျ့ခကျြတှကေ တဖွေးဖွေး အားပါလာရုံမြှမက သှကျ၍လညျးလာသညျ..။ မခငျလှ ဆကျပွီး ကွာကွာမထိနျးနိုငျတော့ ပါ…။ သူမ၏ နို့နှဈလုံးကို ညှဈကိုငျနသေော ဖိုးခြို၏ လကျဖြံနှဈဖကျကို သူမ၏ လကျနှဈဖကျဖွငျ့ ညှဈကိုငျလိုကျကာ ခါးကကော့ ကော့တကျသှားရငျး ပွီးသှားလတေော့သညျ..။
ပွှတျ….ဒုတျ…ပွှတျပွှတျ….အမလေး….အ…အ..အီး……..အား….ဟငျး….. မခငျလှ၏ မကျြနှာလေးက ရှုံ့မဲ့သှားပွီး စောကျပတျ အတှငျးသားတှကေ စောကျခေါငျးထဲမှ လီးကွီးကို လကျနှငျ့ ညှဈ၍ဆှဲဆုတျလိုကျသညျ့အလား ဆှဲညှဈလိုကျလတေော့ ဖိုးခြိုလညျး မခံစားနိုငျတော့ပဲ သုတျရတှေေ ပနျးထုတျလိုကျရပါတော့သညျ..။ ပွီးပါပွီ ။.
မမဖြူက အသက် ၃၀ နီးပါး ရှိနေပြီ ။ အပျိုကြီးဆိုတာတောင်မှ အတော်ပင်ဟိုင်းနေပြီဟု ပြောရမည် ။ မမဖြူ က အတော်လှသည် ။ အသားဖြူ ဖြူ နှင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်က ဗွီဒီယိုမင်းသမီးတွေလိုလှသည် ။ အချိုးကျသည်။ သူ့ကို ကြိုက်တဲ့သူတွေ ရှိ မှာပဲ ။ ဘာလို့သူက မယူခဲ့တာလဲ ဆိုသော အတွေးတွေက ဖိုးချို ခေါင်းထဲ မကြာခဏ ရောက်လာနေကျပေါ့…။
ဖိုးချို အသက် ၂၀ ထဲရောက်နေပြီ ။ မိန်းမတွေရဲ့ အလှအပကို ခံစားတတ်ရုံမက ရွာမှာနေတုံးက ရွာလူကြီးရရဲ့ သမီးကိုပင် ခိုးပြေးဖူးသည် ။ သူ့သမီးကို ခြေသလုံးအိမ်တိုင် ဖိုးချိုနဲ့ သဘောမတူလို့ အတင်းလိုက်ခွဲပြီး သူ့သမီးကို မြို့သို့ ပို့လိုက်သည် ။ အသက် ၁၉ နှစ်နဲ့ ဖိုးချို တစ်ခုလပ် ဘ၀ တိုးတိုးတိတ်တိတ် ရောက်ခဲ့ရသည် ။
ရွာတွင် မနေချင်တော့သဖြင့် မြို့သွားချင်ကြောင်းပြောတော့ ဖိုးချို၏ တစ်ဦးတည်းသော ဦးလေးက သူ၏ သူငယ်ချင်း ရန်ကုန်တွင် ကားဘော်ဒီရုံ လုပ်နေသူ ကိုစံဖေထံသို့ စာရေးပေး လိုက်သည်။ လက်ရင်းတပည့်လိုချင်နေသူ ကိုစံဖေကလဲ ဖိုးချိုကို လိုလိုလားလား လက်ခံခဲ့သည် ။ ကိုစံဖေ့ ဇနီး မခင်လှကလဲ တစ်ရွာထဲသား ဖိုချိုကို ခင်သည် ။ ကိုစံဖေက မြို့တက်သွားတာ ကြာပြီ မို့ သိပ်မသိခဲ့ပေမဲ့ မခင်လှကိုတော့ ရွာမှာနေထဲက ဖိုးချို ကောင်းကောင်းသိသည် ။
ကိုစံဖေတို့ လင်မယားက ဖိုးချိုကို သူတို့နှင့် တစ်အိမ်ထဲ အတူ နေထိုင်စေခဲ့သည် ။ အိမ်မှာက ကိုစံဖေတို့ လင်မယားနှင့် ကိုစံဖေ၏ ညီမ ဖိုးချိုအခေါ် မမဖြူ ဟုဆိုသော ဖြူဖြူ စန်းတို့သာ ရှိလေသည် ။ ကိုစံဖေက ဘော်ဒီဆရာ ဝင်ငွေကကောင်းတော့ ဇိမ်ခံရင်း က ဇော်သမား ဖြစ်လာခဲ့ရသည် ။ ၂၄ နာရီ ကိုစံဖေထံမှ အရက်နံ့က မပြတ်ရနေတတ်သည် ။ အခု ဖိုးချိုကလည်း ရောက်လာပြီး တစ် နှစ်ကျော်လောက်ကြာလာတော့ အလုပ်လဲ ကြိုးစား အပင်ပန်းလဲခံလေသော ဖိုးချိုကို အတော်လေး မျက်နှာလွှဲလို့ ရနေပေပြီ ။
ဒီတော့ ကိုစံဖေက ခါတိုင်းထက် ပိုသောက်လာသည် ။ လက်ထဲမှာ ငွေကသီးနေတော့ မခင်လှကလဲ ကိုစံဖေကို မတား ။ သူကပ င် ကြည်ဖြူ စွာဖြင့် ကိုစံဖေသောက်ရာတွင် မကြာခဏ လိုက်ပါနေတတ်သေးသည် ။ အခုလည်း ညနေ ၄ နာရီထိုးသည်နှင့် ကိုစံဖေ က အလုပ်သိမ်းကာ ရေချိုးပြီး လင်မယားနှစ်ယောက် ထွက်သွားကြချေပြီ .။ ဖိုးချို ၆ နာရီ ထိုးမှ အလုပ်ကို လက်စသတ်ကာ ရေချိုးလိုက်သည် ။ ရေမိုးချိုးပြီး အဝတ်အစားလဲနေတုန်း မမဖြူရဲ့ အသံက ထုံးစံအတိုင်း ထွက်ပေါ်လာသည် ။ ဖိုးချိုရေ ထမင်းစားကြမယ်ဟေ့.. ဟုတ်ကဲ့…မမ.. ဒါက ညနေတိုင်း ကြားနေရသည့် အသံဖြစ်သည် ။ ထမင်းဝိုင်းတွင် ထိုင်ကြတော့ ဖြူဖြူ စန်းက ဖိုးချိုနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ထိုင်စားသည် ။ ထမင်းတစ်လုပ် စားလိုက် ဖိုးချိုမျက်နှာကို မျက်လုံးကြီးတွေ ဝင့်ကြည့်လိုက် ဖြင့် လုပ်နေသည် ။
ဖိုးချိုကတော့ ထမင်းကိုသာ ငုံ့ပြီးလွေးနေသည် ။ မျက်လုံးကို လှန်မကြည့်ရဲ့ ။ ဗြောင်သာ မကြည့်ရဲတာ ၊ မကြာခဏတော့ မမဖြူ ကို ခိုးခိုးပြီးကြည့်တတ်သည် ။ မမဖြူကလဲ လှတာကိုး…။ လူသားစားဖူးသော ကျားက လူနံ့ရလျင် အမြှီးနှံ့ ခေါင်းထောင်ရှာ တတ်သည် ။ ဖိုးချိုကတော့ ဖြူ ဖြူ စန်းကို ခိုးခိုးကြည့်ပြီး သာယာနေတတ်သည် ။ ဖိုးချို ထမင်းကို ခေါင်းမဖော်တမ်း ငုံ့စားနေပေမဲ့ မမဖြူ ထမင်းစားလိုက် သူ့ကို မျက်လုံးရွဲနဲ့ ကြည့်လိုက် လုပ်နေမည်ကို အတတ်သိသည် ။
ဟယ်..ဟင်းက အရည်နဲ့သွားပြီ.. ပြောပြောဆိုဆို မမဖြူက ဟင်းပန်ကန်ကို ကောက်ကိုင်ပြီး မီးဖိုချောင်ဖက် သို့ ထွက်အသွား သူမ၏နောက်ကျောကို ထုံးစံအတိုင်း ဖိုးချို ခိုးကြည့်လိုက်တော့ ခါတိုင်းနဲ့ မတူ ရင်ထဲတွင် တင်းသွားရသည် ။ ကားအယ်လုံထစ် ပြီး လှုပ်ခါနေသော တင်သားကြီးနှစ်လုံးက ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး ဘာမှမထူးပေမဲ့ ထိုတင်သားကြီး နှစ်ခုစပ်ကြား အောက်ဖက်နားတွင် ဖြူ ဖြူ စန်း ဝတ်ထားသော ထမိန်မှာ အမြှောင်းလိုက်လေး စိုနေသည်ကို တွေ့မြင်လိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည် ။ မမဖြူ ငါ့ကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့်လုပ်ပြီး စိတ်ကူးနဲ့ သာယာနေတာပါလား ဆိုသည့်အချက်က ဖိုးချိုစိတ်ထဲ သံမှိုစွဲသွားခဲ့လေသည် ။
ဒုန်း….ဒုန်း……ဒုန်း ဒုန်း…. ဖိုးချိုနားစွင့်လိုက်တော့ မမဖြူ အခန်းထဲက တူထုသံမှန်း သိလိုက်သည်..။ ဒုန်း ဒုန်း… မမဖြူ…ဘာ ရိုက်နေတာလဲ…ကျနော် လုပ်ပေးရမလား.. ခြင်တောင်ကြိုးနိမ့်နေလို့ သံကိုမြှင့်ရိုက်နေတာပါကွယ်.. ဒုန်း…ဒုန်း… ဖိုးချို လှစ်ခနဲ မမဖြူ၏ အိပ်ခန်းထဲ ရောက်သွားသည်.။ ဖြူဖြူစန်းတစ်ယောက် ကြမ်းပြင်တွင် ခြေဖျားလေးထောက် လက်နှစ်ဖက်ကိုအပေါ်သို့ ဆန့်ပြီး တစ်ဖက်က သံကိုကိုင် တစ်ဖက်က တူနဲ့ မမှီမကန်း လှမ်းရိုက်နေသည်..။
ဒုန်းဒုန်း…ဟောတော့…. ခြေဖျားကိုထောက် ခါးကိုစန့်ပြီး လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်း မမှီမကန်း ဆန့်ထားရသဖြင့် ခါးကထမိန်က ကွင်းလုံးကျွတ်ကျတော့သည်..။ ဖွေးခနဲ ဖင်ကြီးကပေါ်သွားသကဲ့သို့ စောက်မွှေးအဖုတ်လိုက်ကြီးကလည်း ဖိုးချိုကို တစ်ကိုယ်လုံး တောင့်တင်းသွားစေသည်..။ မမဖြူ ထဘီကိုငုံ့၍ ကုန်းကောက်လိုက်စဉ် ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှ နောက်သို့ ပြူးထွက်လာသော စောက် ပတ်ကြီးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကြီး တွေ့လိုက်ရသည်…။ ထို့ကြောင့် ဖိုးချိုဝတ်ထားသော ဘောင်းဘီတိုလေးထဲမှ လီးက ဖြောင်း ခနဲ ထောင်ထသွားပြီး တောင်မတ်လာတော့သည်..။ မမဖြူ လှည့်ကြည့်လိုက်သောအခါ ဘောင်းဘီတိုလေးထဲက လီးက ငေါက် တောက်ကြီး တန်းနေသည်ကို အသဲယားစဖွယ်ကြီး တွေ့လိုက်ရပြီး ထဘီကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း လုံးထွေးဝတ်ကာ ကြက်သေ သေ သွားမိသည်..။
စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုဖြစ်သွားသည်မသိ ၊ မမဖြူ၏ ခါးလေးကို ဖိုးချို ဆတ်ခနဲ ဆွဲယူလိုက်ရာ ခါးလေး ကော့ခနဲ ဖြစ်ကာ ရင်ချင်း အပ် မိသွားသည်..။ ခန္ဓကိုယ်နှစ်ခု ပူးကပ်လိုက်မိသည်နှင့် သန်စွမ်းသော ဖိုးချို၏ လက်များက မမဖြူ၏ တစ်ကိုယ်လုံးကို သိမ်းကြုံးဖက် ကာ နှုတ်ခမ်းချင်း တေ့စုပ်လိုက်သည်..။ လီးတန်ကြီးကလည်း မမဖြူ၏ ပေါင်ကြားထဲ သို့ သန်သန်မာမာကြီး တိုးဝင်သွားလေ သည်..။ ပူနွေးချိုမြသော အနမ်းစွမ်းအားက မမဖြူ၏ ခန္ဓကိုယ်ရှိ အကြောအချဉ်များကို ကိုင်တွယ်လှုပ်ခါပစ်လိုက်သည်..။ သူမ၏ ခန္ဓကိုယ်လေး ငလျင်လှုပ်သလို သိမ့်သိမ့်တုန်သွားသည်..။ မမဖြူ၏ လက်နှစ်ဖက်ကလည်း ဖိုးချိုလည်ပင်းကို ရစ်သိုင်းထားမိ လျက်သား ဖြစ်သွားလေသည်..။
ဖိုးချိုက လူငယ်ပီပီ လျင်သည်..။ မမဖြူ ဝတ်ထားသော ရင်စေ့ဘလောက်စ် အင်္ကျီလေးကို ဗြန်းခနဲ ဆွဲကာ ရင်ဘတ်နှိပ်စေ့တွေကို တစ်ချက်တည်းနှင့် ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ပေါက်စီကြီးတွေအလား ဖွေးဖြူသော နို့နှစ်လုံး လှစ်ခနဲ ထွက်လာတော့ ဖိုးချို ငုံ့၍ စို့သည်..။ စို့တာမှ အငမ်းမရ..အတင်းစို့လေတော့ မမဖြူမှာ ရင်ဘတ်ကလေး ကော့တက်လာသည်..။ အ….အ…နာ….နာ တယ်..ဖြေးဖြေး….. မရပါ…။ အရှိန်တက်နေသော ဖိုးချိုက အတင်းငုံ၍ စို့နေသည်..။ တအားစို့သောကြောင့် နို့သီးထိပ်မှ အရည် ကြည်လေးများပင် စိမ့်၍ ထွက်လာကြသည်..။ နို့ရည်ကြည်တို့က ချိုမြိန်လှသလို နှစ်ယောက်စလုံး၏ သွေးသားတွေကိုလည်း ဗြောင်းဆန်သွားစေသည်..။ နို့စို့ရင်း ဖိုးချို၏ လက်တစ်ဖက်က စောက်ပတ်ကြီးကိုနှိုက်ကာ ရွရွလေး ပွတ်ပေးသည်..။ အပေါ် အောက်နှစ်ဖက်ညှပ်၍ ခံစားနေရသောကြောင့် မမဖြူမှာ တအင်းအင်းဖြစ်လာပြီး ပေါင်တန်ရှည်ကြီးတွေက ကားထွက်လာသည်..။
ဖိုးချိုက မမဖြူ၏ လက်တစ်ဖက်ကို ဆွဲယူပြီး မာကြောတောင့်တင်းနေသော လီးကြီးပေါ် တင်ပေးလိုက်သည်..။ လီးကြီးက နဲတာ ကြီးမဟုတ်..။ မမဖြူတစ်ယောက် ကြက်သီးတွေ ဖြိုးဖြိုးဖျင်းဖျင်း ထသွားမိသည်..။ ဖိုးချို သူ့ဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်ရာ လီးကြီးက တရမ်းရမ်းဖြင့် ထွက်လာတော့သည်..။ မမဖြူသည် လီးကြီးကို အံ့သြစွာ ကြည့်ရင်း ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ လက် နှစ်ဖက်ဖြင့် လီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ရာမှ လီးထိပ်ကို အသာဖြဲကြည့်လိုက်လေသည်..။ သပြေသီးမှည့်လို ညိုမဲပြောင်တင်းနေသော လီးထိပ်ကြီးက မမဖြူကို ချုပ်ထိန်းလိုက်သည်..။ အများအားဖြင့် လီးထိပ်တွေက နီရဲနေကြတာ တွေ့ဖူးသည်..။ ဖိုးချို၏ လီးဒစ် ကြီးကတော့ ထိုသို့မဟုတ် ၊ သပြေသီးမှည့်ရောင် ညိုမဲပြောင်တင်းနေသည်..။
ဒစ်ကြီးကလည်း ငါးမျှားချိတ်လို နောက်ပြန်ကော့နေသည်..။ စောက်ခေါင်းထဲသို့ ထိုးဝင်သွားပါက ဒစ်က စောက်ပတ်အတွင်းသားနု နုလေးတွေကို ရက်ရက်စက်စက် ဆွဲချိတ်ပစ်မည့်သဘော ရှိသည်..။ မမဖြူ၏ မျက်နှာဖွေးဖွေးလေး နီမြန်းလျက် စောက်ပတ်ဝက တစစ်စစ် ဖြစ်လာရသည်..။ အရည်ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်နေတော့သည်..။ ဟင်း……ဟင်း…သန်လိုက်တဲ့…ဟာကြီး….. မမ ဖြူက ပြောပြောဆိုဆို လက်ညှိုးလေးဖြင့် လီးထိပ်ကို တောက်ကနဲ ရိုက်လိုက်ရာ ဖိုးချိုဖင်ကြီး တုန်ခါသွားရသည်..။ ချစ်စရာ ကြီး…ကွယ်…. တုန်တုန်ရင်ရင်လေး ပြောရင်း လီးတန်ကြီးကို ပါးပြင်လေးနှင့် ဖိကပ်ကာ ပွတ်လှိမ့်ရင်း ကျေကျေနပ်နပ်လေး ကြည်နူးနေရှာသည်..။ မချင့်မရဲ ဖြစ်လာသော မမဖြူက လီးထိပ်ကို နှုတ်ခမ်းလေးများဖြင့် ပြွတ်ခနဲ တစ်ချက် စုပ်နမ်းလိုက်ရာ ဂွေး စေ့ကြီးနှစ်လုံးက ကျုံ့ခနဲ အပေါ်သို့ လိမ့်တက်သွားသည်..။
မမဖြူသည် လီးထိပ်က အရေပြားကို အောက်သို့ ဆွဲချလိုက်ပြီး အညိုရောင်သန်းနေသော လီးထိပ်ကြီးကို လျှာဖျားလေးဖြင့် တို့ထိ ကစားလိုက်သည်..။ လက်ထဲ၌ ဆုပ်ထားသော လီးတန်ကြီးက တင်းခနဲတင်းခနဲ ထကြွသွားပြီး အကြောကြီးတွေ ထောင်ထသွား လေသည်..။ မမဖြူ၏ လျှာဖျားလေးက လီးထိပ်ရှိ အရေကြည်လေးတွေ ထွက်နေသော အပေါက်လေးထဲသို့ ဆတ်ခနဲ နေအောင် ထိုးလိုက်သော အခါ… အာ့….အ….မမ….အား……. အင့်…အွန့်..အိ.အွန့်….. ဖိုးချိုက ရုတ်တရက် မထိန်းချုပ်နိုင်တော့ပဲ သူ၏ လီး တန်ကြီးကို မမဖြူ၏ နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြားသို့ ဆောင့်၍ ထိုးထည့်လိုက်မိ လေတော့သည်..။ မမဖြူ၏ ပါးစပ်ထဲ လီးကြီးက ကြပ် သိပ်စွာဝင်သွားပြီး လီးထိပ်က အာခေါင်ကို သွား၍ ထိုးမိလေရာ အသက်ရှူပင် မှားသွားရလေသည်..။ ဖိုးချိုကတော့ မမဖြူရဲ့ ခေါင်းလေးကို စုံကိုင်လျက် ဆောင့်ကာဆောင့်ကာ လိုးပစ်လိုက်သည်..။ မမဖြူ မျက်နှာလေး နီရဲကာ မျက်ရည်လေးများ ဝိုင်းသွား ပြီး ဖိုးချို၏ လမွှေးအုံကြီးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်တွန်းကာ ခေါင်းကို နောက်သို့ ဆွဲကာ ရုန်းဖယ်လိုက်ရလေသည်..။ ထိုအခါကျ မှ ဖိုးချို၏ လီးတန်ကြီးက မမဖြူ လက်ထဲမှ ပြွတ်ခနဲ လွတ်ထွက်သွားရလေသည်..။
သွား……ဘာလုပ်မှန်း မသိဘူး…..ဆိုးလိုက်တာ…… မမဖြူ မျက်နှာနီလျက် ဖိုးချိုကို မျက်စောင်းလေးထိုး၍ ပြောသည်..။ ဖိုးချို ကမန်းကတန်း ထိုင်ချလိုက်ကာ မမဖြူ၏ ပခုံးလေးနှစ်ဖက်ကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ကျနော် စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ပါ….မမဖြူရာ… မင်း စိတ်မထိန်းနိုင်တာကလဲ ..ငါ့မှာ အသက်တောင် ဘယ်လိုရှူရမှန်း …မသိဘူး…. ဖိုးချိုက မမဖြူရဲ့ ပါးကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ညင်သာစွာ နမ်းလိုက်သည်..။ ဒေါပွနေသော အပျိုကြီး မမဖြူ တစ်ယောက် ကျေနပ်သွားရလေသည်..။ တော်ပြီ….. မစုပ်ပေးတော့ ဘူး…. မမကို ကျနော် ယက်ပေးမယ်…နော်…. အို…………မလုပ်နဲ့….ဟင့်အင်း…….ဟင့်အင်း…….. အဲဒီလို လုပ်ပြီး…နှူးနှပ်ထားမှ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ မမဖြူလဲကောင်း ကျနော်လဲ ကောင်း…… အံမယ်…..မင်းလုပ်တာကို ဘယ်သူက ခံမယ် ပြောနေလို့လဲ….ရီရ တယ်…တော့…ခစ်ခစ်….ခစ်.. ဖိုးချို တင်းသွားသည်..။ လီးကြီးက တဆတ်ဆတ် တုန်နေသည်..။ တွေ့ကြသေးတာပေါ့….ဟု စိတ် ထဲက ရေရွတ်ပြီး ဒူးထောက်ထိုင်နေသော မမဖြူကို အိပ်ယာပေါ်ဆွဲလှဲ လိုက်သည်..။ အားဖြင့် ဆွဲလှဲလိုက်ပေမယ့် မမဖြူက ရုန်း၍ တောင့်ထားသဖြင့် ပုံလျက်သား လဲကျမသွား..။ ဖြစ်သလို ဝတ်ထားသော ထဘီက ကျွတ်ကျသွားပြီး လူက အိပ်ယာပေါ် လက်ထောက်မိကာ လေးဖက်ကုန်းလျက်သားလေး ဖြစ်သွားရသည်..။
ဖိုးချိုက ဖြတ်ခနဲ သူမနောက်သို့ ဒူးထောက်ဝင်လိုက်ပြီး မမဖြူ၏ ကျောကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဖိကာ လီးထိပ်နဲ့ တေ့ထောက်လိုက် သည်..။ အဲ့…ဟဲ့….အဲဒါ ….ဖင်နော်….အပေါက်မှားပြီး ထိုးမထည့်လိုက်နဲ့…..နေအုံးလေ…. ဖိုးချိုက ဖင်ဝကို လီးထိပ်ကြီးဖြင့် တ ရွရွ မွှေနှောက်ပေးလိုက်ရာ မမဖြူဖင်ကြီး ကော့ထောင်၍ လာသည်..။ ဟဲ့….အို…ဖင်..ဖင်ကို မလုပ်နဲ့…..နော်……… မမဖြူ ပြော နေစဉ် ဖိုးချိုက စအိုဝကို လီးထိပ်ဖြင့် မွှေမွှေပေးရင်း လက်တစ်ဖက်က ဖင်ကြားအောက်မှ နောက်ဖက်သို့ ပြူးထွက်နေသော စောက်ဖုတ်ကြီးကို ဆွဲပွတ်လိုက်ရင်း လက်ချောင်းဖြင့် စောက်စေ့လေးကို ချိတ်ချိတ်ပြီး ဆွပေးလိုက်သည်..။ အား…..ကျွတ်ကျွတ်….အိုး…အိုး………. မမဖြူ ဖင်ကြီး ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ ကော့ကော့ တက်သွားသည်..။ ဖိုးချိုက အစေ့လေးကို လက်ညှိုးဖြင့် ဖိ၍ ဆွဲနေစဉ် သူ့လီးကြီးကလည်း စအိုဝလေးကို မနားတမ်း ပွတ်ပေးနေသည်..။
ရှီး…..အ….ကျွတ်..ကျွတ်….အားလားလား…………..ဟင်း…အင်း……….. မမဖြူ၏ ဖင်ကြီးက ရမ်းခါနေသည်..။ စောက်ရည် ကြည်များကလည်း ပေါက်ခနဲ ပေါက်ခနဲ…ယိုစီးကျ၍လာသည်..။ အင်း..အိုး..အိုး…………အ..အ…အား….ဟင်း………….. မမ ဖြူ၏ ကော့ထောင်နေသော ဖင်ကြီးက ဟိုရမ်းသည်ရမ်း နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက် ဖြစ်နေသည်..။ ဖိုးချို၏ လီးထိပ်မှာလည်း အရည် ကြည်လေးတွေ စိမ့်ထွက်လာသည်..။ ဖိုးချို က မမဖြူ၏ စောက်ပတ်အဝ ဝိုင်းဝိုင်းလေးကို ဖြဲ၍ လီးကြီးကို တေ့သွင်းလိုက်သည်..။ ရှုံ့ထားသောကြောင့် မမဖြူ၏ စောက်ပတ်က တင်းကျစ်နေပြီး လီးထိပ်ကြီးကို ဖမ်းညှစ်ထားရာ ဖိုးချိုမှာ အားစိုက်လျက် ဆောင့်ချ လိုက်သော အခါတွင်မှ လီးဒစ်ကြီးက ကျွံဝင်သွားရလေသည်..။
အား…..အား….ဖြေး ဖြေး…..အမလေး…..လေး………….. လီးက ကြီးလွန်းတော့ ခံရတာ မသက်သာလှချေ…။ ဖိုးချိုကလည်း လီး ဒစ်ဝင်သွားပြီး နူးညံ့စိုအိသော စောက်ခေါင်းအတွေ့ကို ရသွားသည်နှင့် လီးကို ခပ်ဖိဖိလေး ဆောင့်ဆောင့်ပြီး လိုးလိုက်သည်..။ အင်း….. ဟူသော အသံရှည်လေးဆွဲရင်း မမဖြူမှာ ရှေ့မှထောက်ထားသော လက်နှစ်ဖက်က ပျော့၍ ကွေးပြီး ဝပ်ကျသွားလေ သည်..။ ဗြစ်…ဘွပ်….စွပ်….ဖလွတ်…… ဟင့် …ဟင့်….အင့်…ဟင့်….အိုး………..အို….အင့်….. စောက်ပတ်အုံကြီးကသာ မ တရားထွားကားနေသော်လည်း စောက်ခေါင်းပေါက်က ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဖြစ်သောကြောင့် ကြီးမားလှသော ဖိုးချို၏ လီးကြီးမှာ အရသာတွေ့လှသည်..။ ဆက်ကာဆက်ကာ ဆောင့်လိုးလိုက်ရာ မမဖြူရဲ့ ဖင်ကြီးမှာ လှုပ်ခနဲ လှုပ်ခနဲ ဖြစ်သွားရာမှ တုန်တုန်သွား သည်..။ စောက်ပတ်အုံကြီးက ပို၍ နောက်သို့ ပြူးလာပြီး ခံအားကလည်း ကောင်းနေသောကြောင့် ဖိုးချို၏ လိုးအားကလည်း ပို၍ ထန်လာရတော့သည်.။ ထိသလား မမေးနဲ့..တစ်ချက်ဆို ဆိုသလောက် ပစ်ပစ်နှစ်နှစ် ဆောင့်ချလိုက်တိုင်း စောက်စေ့လေးမှာ ကျင် တက်သွားသည်..။
ဗြစ်….ဒုတ်….. ဟူသော အသံမျိုးလေးသာ နားထဲဝင်လာလို့ကတော့ ဆိမ့်ကျင်သွားအောင် ကောင်းပြီး အသဲကို စွဲသွားတတ်လေ သည်..။ ဖိုးချိုက ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်လိုက် မှေးပြီး ခပ်ဖွဖွလေး ဆွဲဆွဲထုတ်လိုက် ဖြေးဖြေးလေး သွင်းလိုက် စောက်ပတ်ညှစ်အားလေးကို ခံစားလိုက်ဖြင့် အမျိုးမျိုးလုပ်ချင်တိုင်း လုပ်ပြီးနောက် မမဖြူ၏ ဖင်ကြီးကို ပွတ်ကာ သပ် ရင်း ခပ်ကြမ်းကြမ်း ခပ်သွက်သွက်ကြီး ဆောင့်ပါတော့သည်..။ ပြွတ်…ဘွပ်….ဗြစ်….ဒုတ်….ဒုတ်….အ..အင့်ဟင့်….အင့်…ပ လွတ်……ဒုတ်…. မမဖြူကလည်း သူမ၏ ဖင်ကြီးကို အားကြိုးမာန်တက်နောက်သို့ ပြန်ပြန်ကော့ပေးနေသည်မှာ ဖင်ကြောကြီး များ ထောင်လာသည်အထိပင် ဖြစ်သည်.။ ဘွတ်….ပလွတ်…..မမ……ဗြစ်….ဒုတ်…လုပ်…လုပ်….အင်း…..ဟင့်….ဟင်း….. အင်း…… အသံရှည်လေးဆွဲရင်း မမဖြူတစ်ယောက် ခေါင်းထောင်ကာ ဖင်ကြီးရမ်းသွားချိန်မှာတော့ ဖိုးချိုကလည်း သူ့လီးကြီးကို အဆုံးစိုက်သွင်းပြီး အရေများကို ပန်းပြီးထည့်လိုက်ပါတော့သည်..။
ကိုစံဖေ…..ကိုစံဖေ…….. အသံကို ခပ်အုပ်အုပ်ခေါ်ကာ မခင်လှက စံဖေကို လှုပ်နှိုးသည်..။ စံဖေ တုတ်တုတ်မျှ မလှုပ်ပေ…။ တ ရှူးရှူးဖြင့် အိပ်မောကျနေသည်..။ ကျွတ်….ဒီနေ့ လျှော့သောက်ပါလို့ ပြောထားတဲ့ ဥစ္စာ..အိပ်နေလိုက်တာ..သေနေတဲ့ အတိုင်း ပဲ….. အတော်ပင် ဒေါသထွက်လွန်း၍သာ မခင်လှ ဒီလို မြည်တွန်တောက်တီးလိုက်ရခြင်း ဖြစ်သည်..။ အမှန်က ကိုစံဖေက မခင်လှ ထက် အသက် ဆယ်နှစ်မျှ ကြီးသည်…။ မခင်လှအသက်က ခုမှ ၃၀ ထဲ ရောက်ရုံသာ ရှိသေးသည်..။ သွေးသားအဆူဖြိုးဆုံး အရွယ် ဟု ပြောရမည်ဖြစ်သည်..။ တဖြေးဖြေး အရက်၏ ကျေးကျွန်ဖြစ်လာသော စံဖေက သူ့ထက်အများကြီးငယ်ပြီး ဆူဆူဖြိုး ဖြိုး လှပတောင့်တင်းသော မခင်လှကို ပင် ဂရုမပြုနိုင်အားတော့ မူးပြီးရင်းသာ မူးနေခဲ့သည်..။ စိတ်ရှည်ရှည်ဖြင့် စောင့်စားခဲ့ပေ မယ့် မနေနိုင်တော့သည့်အဆုံး မခင်လှ ဒီနေ့ အရက်ကို လျှော့သောက်လာခဲ့ဖို့ နဲ့ ကျမနဲ့လဲ အေးအေးဆေးဆေး နေပါအုံး ဆိုတဲ့ စကားကို ပြောထွက်ကာ မှာလိုက်ပေးမယ့် စံဖေ ဘယ်လောက်တောင် သောက်လာသည် မသိ ။ ပြန်ရောက်လာကထဲက အိပ်ယာ ထဲ အလျားထိုးဝင်ကာ အိပ်လေတော့သည်..။
မခင်လှကလည်း ဒီနေ့မှ စံဖေ၏ နောက်သို့ လိုက်၍ မသွားဖြစ်…။ အိမ်မှာ ဖြူဖြူ က မရှိ..။ သူတို့၏ ညီမ ဝမ်းကွဲများ အလည် လာ၍ ပြန်သွားသော ပဲခူးသို့ ဖြူဖြူက လိုက်ပါသွားခဲ့သည်..။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေမှ ပြန်လာမည်ဖြစ်၍ ဖိုးချိုနဲ့ သူမအတွက် ညစာကို ချက်ရပြုတ်ရသေးသည်..။ သက်ပြင်းအခါခါ ချရင်း ခြင်ထောင်ထဲ တွင် ငုတ်တုတ်ထိုင်လျက် အိပ်ပျော်နေသော စံဖေကို စိတ်ပျက်လက်ပျက် ကြည့်နေမိသည်..။ မခင်လှ စိတ်ကတော့ မလျှော့ချင်သေးပါ..။ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဟု တွေး နေမိသည်..။ နောက်ဆုံးကြိုးစားသည့်အနေဖြင့် မခင်လှက ပြေလျော့နေသော စံဖေ၏ ပုဆိုးကို ပေါင်လည်လောက်အထိ ဆွဲချ လိုက်သည်..။ မဲနက်နေသော ဥကြီးတွေပေါ်တွင် စင်းစင်းကြီးဖြစ်နေသော လီးချောင်းကြီးက ပျော့တွဲတွဲကြီး..။ မခင်လှ လက်ညှိုး လက်မတို့ဖြင့် ညှပ်၍ လီးချောင်းကြီးကို မလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ လက်ဖဝါးဖြင့် အောက်မှ ပင့်ကိုင်လိုက်ပြီး ပျော့တွဲတွဲ လီးချောင်း ကြီးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ထို့နောက် အပေါ်က အရေပြားကို ဆွဲတင်ဆွဲချဖြင့် လုပ်ပေးသည်.။
ခဏကြာတော့ လီးက မာသလိုလို ဖြစ်လာသည်..။ အရည်ပြားဆွဲချလိုက်တော့ ပြဲပြဲသွားသော လီးထိပ်ကြီးကို ကြည့်ရင်း မခင် လှ၏ စိတ်တွေက ပို၍ ထလာသည်..။ စံဖေ၏ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ စံဖေက မနိုးသေး..။ အိပ်၍ ကောင်းနေဆဲပင်…။ အရေပြားဆွဲချလိုက်၍ ပေါ်လာသော ဒစ်ကြီးကို လက်မထိပ်လေးဖြင့် ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးသည်..။ လီးခေါင်းကြီးက ပွသလိုဖြစ်လာ ပေမယ့် လီးတန်ကြီးကတော့ မထူးခြား ပျော့ခွေနေဆဲသာ ဖြစ်သည်..။ လီးကို အသာဆုပ်၍ ရှေ့တိုးနောက်ငင်ဖြင့် ခပ်ကြမ်းကြမ်း လေး ဂွင်းတိုက်ပေးသည်..။ ထိုသို့လုပ်ရင်း စံဖေ၏ မျက်နှာကိုလည်း လှမ်းလှမ်းကြည့်သည်..။ စံဖေက တုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်သလို သူ့ လီးကလည်း နိုးထလာခြင်း မရှိပေ..။ မနေနိုင် မထိုင်နိုင်ဖြစ်နေသော မခင်လှ၏ ပေါင်ကြား၌သာ အရည်တွေက ရွှဲသထက် စိုရွှဲလာ သည်..။
ကျွတ်…မသာကြီး….သေနေလိုက်တာ….. မခင်လှ စိတ်ပျက်၍ လီးကို လက်ထဲမှ လွှတ်ချလိုက်သည်..။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့် စံ ဖေကို ကျောခိုင်းလိုက်ပြီး ရင်လျားထားသော ထဘီကို ဆွဲတင်၍ ဝတ်လိုက်သည်..။ ဟုတ်ပါသည်..။ မခင်လှက စောစောက စံဖေ ကို နှိုးတော့မည်ဟု ကြံကထဲက အဝတ်အစားတွေကို ချွတ်ကာ ထဘီကို ရင်လျားထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်..။ ဒါမှ စံဖေနိုးလာ၍ အလုပ်ဖြစ်လျင် လွယ်ကူမည်သည်..။ပေါင်ကြားမှ ထွက်နေသော အရည်များကို အိမ်သာသို့ဝင်၍ ရေဆေးသည်..။ ပြီးတော့ အဝတ်အစားပြန်ဝတ်ကာ ကျိတ်မှိတ်အိပ်တော့မည်ဟူသော အတွေးဖြင့် မခင်လှ ခြင်ထောင်ကို မ၍ ထွက်ကာ အိပ်ခန်းထဲထွက်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးဖက်သို့ လျှောက်လာခဲ့သည်…။ ထိုသို့ လျှောက်လာရင်း ခြေရင်းဖက်တွင် ခြင်ထောင်ထောင်၍ အိပ်နေသော ဖိုး ချို၏ ထံသို့ မခင်လှ၏ မျက်လုံးက ရောက်သွားသည်..။
ဟင်း……အတော်အအိပ်ဆိုးတဲ့ ကောင်လေး….. ဟုတ်ပါသည်..။ ခြင်ထောင်ထဲတွင် အိပ်နေသော ဖိုးချိုက ခြင်ထောင်ကို ကန့်လန့် ကြီး အိပ်နေကာ ခါးအောက်ပိုင်း ကိုယ်တပိုင်းက ခြင်ထောင်အပြင်ဖက်သို့ ရောက်နေသည်..။ ပြီးတော့ ပုဆိုးက ခါးတွင် မရှိ..။ ဒူးဆစ်အထိ လျှောကျနေသည်..။ မြင်လိုက်သော မခင်လှ သူမဘာသာပင် သတိမထားမိလိုက်ပဲ ဖိုးချိုး၏ အနားသို့ ရောက်သွား ကာ အနီးကပ် ငုံ့၍ ကြည့်လိုက်မိသည်..။ ဟယ်……နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး….. မခင်လှ တစ်ယောက်တည်း တိုးတိုးလေး တုန်တုန်ခိုက်ခိုက် လေး ပြောလိုက်မိသည်..။ မဲနက်လုံးတစ်နေသော ဂွေးဥကြီးက နဲတာကြီး မဟုတ်သလို မာမာတောင့်တောင့်ဖြစ် နေသော လီးကြီးကလည်း အကြီးကြီးပဲ….။ ကိုစံဖေ၏ လီးထက် သိသိသာသာကြီးကို ကြီးကြောင်း မခင်လှ တွေးလိုက်သည်..။
ဗြုန်းဆို မခင်လှ ငုတ်တုတ်ထိုင်ချလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ခြင်ထောင်ထဲသို့ နားစွင့်လိုက်တော့ ဖိုးချိုက တရှူးရှူး အိပ်မောကျ နေသည်..။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး မစဉ်းစားချင်တော့ပဲ မခင်လှ၏ လက်တစ်ဖက်က ဖိုးချို၏ လီးကြီးကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သည်..။ ကိုင် လိုက်သော လက်က တုန်တုန်ရင်ရင်ဖြစ်နေပြီး လက်ထဲက လီးကြီးကတော့ တဒိတ်ဒိတ် သွေးတိုးနေသည်..။ လက်ဖြင့် ဆုပ်ထားဆဲ မှာပင် လီးကြီးက တင်းခနဲ တင်းခနဲ ဖြစ်ကာ ကြီး၍လာသည်…။ ဟယ်….သန်လိုက်တဲ့ ဟာကြီး….. ပူနွေးမာကျောလှသော လီး ကြီး၏ အတွေ့က မခင်လှအား အရာရာကို မေ့သွားစေသည်..။ လက်တစ်ဖက်က လီးချောင်းကြီးကို ကိုင်ရင်း ကျန်သော လက် တစ်ဖက်က လုံးတစ်နေသော ဂွေးဥကြီးကို အောက်မှနေ၍ ပင့်မကာ ကိုင်လိုက်သည်..။
ပြီးတော့ ဂွေးဥကြီးကို ဖွဖွလေး ဆုတ်ဆုတ်ပြီး ညှစ်ကြည့်နေမိသည်..။ ကျန်လက်တစ်ဖက်အတွင်းမှ လီးချောင်းကြီးကတော့ စံချိန် လွန်အောင်ပင် မာတောင့်လာပြီး ဆုတ်ကိုင်ထားသော မခင်လှ၏ လက်ထဲမှ ရုန်းကန်ထွက်နေသယောင် ..တဆတ်ဆတ်တုန်ခါ၍ လာရသည်…။ ထကြနေသော သွေးသားများနှင့် ထိတွေ့နေရသော အထိအတွေ့များကြောင့် မခင်လှမှာ တစ်လောကလုံးကို မေ့သွား ခဲ့ရပြီ..။ လီးပေါ်မှ လက်ကို လွှတ်လိုက်တော့ ဖိုးချို၏ ဧရာမလီးကြီးက မိုးကိုမျှော်ကာ ထောင်မတ်လျက် လီးခေါင်းကြီးက တ ဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသည်..။ သည်လီးကြီးကို တရှိုက်မက်မက် ကြည့်ရင်း မခင်လှ ဖိုးချို၏ ဘေးတွင် ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ရာမှ ရင်ဘတ်တွင် စည်းနှောင်ထားသော ရင်လျားထားသည့် ထဘီကို ဖြည်၍ ချွတ်ချလိုက်သည်..။ ပြီးတော့ ဒူးကို တစ်ဖက်စီကြွပြီး ထဘီကို ကွင်းလုံးကျွတ်သွားအောင် ချွတ်ပစ်လိုက်သည်..။ ဖွေးနှစ်လုံးတစ်နေသော နို့ကြီးနှစ်လုံးနှင့် မခင်လှတစ်ယောက် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းနေပြီ…။ ရင်အစုံက နိမ့်ချည်မြင့်ချီ ဖြစ်နေသည်..။
မခင်လှ အလိုလိုနေရင်း မောနေသည်..။ တုန်ရင်နေသော လက်ချောင်းလေးများဖြင့် တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသော လီးကြီးကို လှမ်း၍ ဆုပ်ကိုင်လိုက်ကာ ဖိုးချို၏ ခါးဆီသို့ ခွတက်လိုက်သည်…။ သည်အခိုက်မှာပင် ခြင်ထောင်က လှုပ်ခနဲ လန်တက်သွားပြီး ကြုံးထ၍ ထိုင်လိုက်သော ဖိုးချိုက သူ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ကုန်းကုန်းကွကွဖြစ်နေသော မခင်လှကို သိမ်း၍ ဖက်ကာ အိပ်ယာပေါ်သို့ လှဲချလိုက်သည်..။ အို….ဟဲ့….ကောင်လေး….ခွေးလေး….နိုးနေရက်သားနဲ့….ဟဲ့…လွှတ်…လွှတ်…..အို……လွှတ် ဆို…… ရှက်ရမ်းရမ်း၍ ပြောနေသော်လည်း မရုန်းပါ…။ ရုန်း၍လည်း မရပါ…။ ဖိုးချိုက ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကြုံး၍ ဖက်ထားတော့ မခင် လှ အသက်ရှူပင် မရချင်တော့…။ ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ငုံ့ကြည့်သည်..။ ဖွေးနှစ်နေသော နို့ကြီးတွေက မမဖြူ၏ နို့ တွေထက် နှစ်ဆခန့်ကြီးသည်..။ အားရစရာကြီးပင်…။ နို့သီးတွေကလည်း ခပ်ထွားထွား…။ နို့တစ်လုံးကို ငုံ၍ အငမ်းမရ စို့လိုက် သည်..။
အ…..ကျွတ် ကျွတ်….. မခင်လှ ရင်ဘတ်ပင် ကော့တက်သွားရသည်..။ တော်တော် နို့စို့သန်တဲ့…ကောင်လေး….. သန်လိုက်တာမှ ရင်ခေါင်းထဲအထိပင် တစစ်စစ် ဖြစ်သွားရအောင် စို့ပစ်နေသည်..။ တအားစို့လေတော့ ခံရတဲ့သူက ကျင်ခနဲ ကျင်ခနဲ နာနာသွားပြီး နို့ရည်ကြည်တွေက တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာသည်..။ ထိုနို့ရည်ကြည်တို့၏ ချိုမြိန်သော အရသာကိုပင် ဖိုးချိုက ခုံမင်နေသည်…။ နောက်ထပ် နို့တစ်လုံးကို ပြောင်းစို့ရင်း ဖိုးချို၏ လက်တစ်ဖက်က မခင်လှ၏ ပေါင်ကြားသို့ ရောက်သွားသည်…။ ဟဲ့…..အို အို…..လက်ကြီးနဲ့……. မခင်လှ ပေါင်နှစ်လုံးကို အတင်းစေ့သည်..။ ဒါပေမယ့် သူမထက်မြန်သော ဖိုးချို၏ လက်က စောက်ဖုတ် ကြီးကို အမိအရ ဖမ်းဆုတ်မိနေပြီ…။ ထွက်နေသည့် အရည်တွေက အဆမတန် ဖောင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်ကြီးသာ မက ပေါင်တွင်းသားတွေထိပါ ရွှဲနစ်နေသည်..။ ရေဖြင့် လောင်းထားသလားပင် အောက်မေ့ရသည်..။
သူ့အကြောင်းကို သူသိသော မခင်လှ အတော်ရှက်သွားသည်..။ မျက်နှာကို တစ်ဖက်သို့ စောင်း၍ လွှဲထားလိုက်မိသည်..။ အ… အ….ကျွတ် ကျွတ်……အင်း…..ဟင်း…… ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ နို့သီးကို နို့အုံကြီး ရှေ့ထွက်လာအောင် နှုတ်ခမ်းနှင့် ညှပ်၍ ဆွဲလိုက် ပြီးမှ အားကုန်စုပ်၍ စို့လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်..။ ဆန္ဒတွေ ပြင်းလွန်းလာသဖြင့် မခင်လှ တစ်ကိုယ်လုံး ကတုန်ကရင်ကြီး ဖြစ်လို့လာရ လေသည်..။ ကဲ….အစ်မ စောစောက အပေါ်က တက်ပြီးလုပ်မလို့မို့လား….လုပ်တော့လေ…… ပြောလဲ ပြော ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ လှိမ့်ဆင်းကာ ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်..။ ဖိုးချို၏ ကြီးမားလှသော လီးကြီးက အကြောပြိုင်းပြိုင်းဖြင့် တောင်မတ် လျက် ရှိသည်..။ ဟွန်း….တော်တော် အသက်သာခို…. မခင်လှက ပက်လက်လှန်နေရာမှ လီးကြီးကို မျက်လုံးလေးစွေကာ ကြည့် နေရာမှ ပြောလိုက်ပြီး ထ၍ ထိုင်လိုက်သည်.. ။ ပြီးတော့ ဖိုးချို၏ ခါးပေါ်သို့ တက်ခွလေရာ ဖိုးချိုက ပြုံးဖြီးဖြီးနှင့် သူမကို ကြည့်နေ ကြောင်း တွေ့လိုက်ရတော့ မခင်လှ မျက်နှာလေး ရဲသွားသည်..။
ကြည့်မနေနဲ့….မျက်လုံးမှိတ်ထား……. ခပ်ဆတ်ဆတ်လေသံနှင့်အတူ လက်တစ်ဖက်က လီးကြီးကို လှမ်းကိုင်လိုက်သည်..။ ပြီး တော့ ဖိုးချိုမျက်လုံးမှ မှိတ်ထားရဲ့လားဟု ကြည့်လိုက်ရာ ပြောထားသည့်အတိုင်း မျက်လုံးမှိတ်ထားသည်ကို တွေ့ရ၍ မခင်လှသည် လက်ထဲမှ လီးကြီးထိပ်ဖြင့် သူမ၏ စောက်ပတ်ကြီးထိပ်ရှိ စောက်စေ့ကို ဖိဖိပြီး ပွတ်သည်..။ ထိုသို့ ပွတ်ရင်း မခင်လှ၏ ပါးစပ်လေး က ဟ၍ဟ၍ သွားသည်.။ စောက်စေ့ကို လေးငါးကြိမ်မျှ ပွတ်ပြီးသောအခါတွင်မှ လီးထိပ်ကြီးကို စောက်ပတ်ဝတွင် တြေ့ပီး မ ခင်လှ တဖြေးဖြေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချသည်..။ ထိုသို့ လီးကို စောက်ပတ်ထဲ သွင်းရင်း မခင်လှ၏ ပါးစပ်လေး ဟ၍ သွားရုံမက လည်ပင်းကြောလေးများ ထောင်အောင်ပင် သူမ၏ မျက်နှာလေးက မော့၍ သွားသည်..။ ဟင်း ဟင်း….ကြီးလိုက်တဲ့ ဟာကြီး ကွယ်….ဟင်း…..ဟင်း…. သူမဘာသာ ငြီးတွားရင်း ဖြေးဖြေးချင်းထိုင်ချကာ လီးကိုသွင်းယူသည်..။ လီးတန်ကြီး တဆုံးဝင်ရန် လက်နှစ်လုံးလောက်အလိုတွင်တော့ အောက်မှ ဖိုးချိုက ခါးကိုဆတ်ခနဲ ကော့ကာ လီးကိုဆောင့်၍ သွင်းလိုက်သည်..။
ဗြစ်….အမလေး…ကျွတ်…လန့်လိုက်တာ….မျက်လုံး ဘာလို့ဖွင့်တာလဲ..ပြန်မှိတ်ထား…. စောက်ခေါင်းထဲသို့ လီးချောင်းကြီးတစ်ခု လုံး တဆုံးဝင်သွားတော့ မခင်လှက ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်လျက်မှပင် ဇကောဝိုင်းပြီး နှဲ့ နှဲ့ပွတ်ပေးသည်..။ ပြီးတော့မှ ဒူးထောက်ထိုင် ချလိုက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို ဖိုးချို၏ ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချကာ ဖင်ကြွပြီး တစ်ချက်ချင်း ဆောင့်၍ လိုးသည်..။ ဗြစ်….ပ လွတ်….ဖွတ်……ဗြစ် …ဗြစ်……… ဖိုးချိုက ခေါင်းထောင်ထ၍ မခင်လှ၏ နို့ကြီးနှစ်လုံးအား တစ်လုံးကိုဆွဲ၍ တစ်လုံးကို အားရပါးရ စို့သည်..။ ပြွတ်….စွတ်…..တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ ကောင်လေး…..ဟင်း..ဟင်း……ပြွတ်ပြွတ်…… မခင်လှ၏ ဆောင့် ချက်က တစ်ချက်ချင်း လေးလေးမှန်မှန်နှင့် ဆောင့်သည်..။ ပြီးလျင် လေးငါးချက်လောက် ဆောင့်လိုက် စောက်ပတ်ဝကို လီးအရင်း တွင် ကပ်၍ နှဲ့လိုက်နှင့် လိုးသည်..။ ထိုသို့ဆောင့်၍ လိုးရင်း မခင်လှ၏ မျက်လုံးလေးတွေက စင်း၍ ကျသွားရသည်..။
တစ်ချက်ချင်း လေးလေးနှင့် မှန်မှန်ဆောင့်လိုးရင်း အရသာခံကာ ဇိမ်ယူနေသော မခင်လှမှာ ခဏအကြာတွင် အသက်ရှူသံတွေ ပြင်းလာပြီး မောသံပေါက်လာသည်..။ တစ်ချက်ချင်း လိုးနေသောကြောင့် အောက်မှ ဖိုးချိုကလည်း အားမရနိုင် ဖြစ်လာသည်..။ မခင်လှ၏ ဆောင့်ချက်တိုင်း လီးကိုခပ်ပြင်းပြင်း အောက်မှ ပင့်ပင့်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ မခင်လှမှာ တအင့်အင့်နှင့် ဖြစ်လာရုံမက ဟင်းခနဲ ဟင်းခနဲ လေအံသံလေးတွေပါ ထွက်လာသည်..။ အားမရနိုင်သော ဖိုးချိုတစ်ယောက် သူ့စိတ်တိုင်းကျ အားပါးတရ ဆော င့်လိုးချင်စိတ်က ပြင်းသထက် ပြင်းလာသည်..။ ပြွတ်…ပြွတ်…..အင်း…..ဗြစ်…..ဟင့်ဟင့်….. အစ်မမောရင် ကျနော် တလှည့် လိုး ပေးအုံးမယ်….နော်… အင်း….. မချွတ်နဲ့ ….မမ… မခင်လှက စောက်ပတ်ထဲမှ လီးကိုချွတ်၍ ဘေးကိုပက်လက်လှန်ချတော့မည့် အလုပ် ဖိုးချိုက အချိန်မှီ ပြောလိုက်ရင်း မခင်လှကို တင်းကြပ်စွာဖက်လိုက်ပြီး လီးကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးဖိကပ်၍ သွင်း ထားလိုက်သည်..။
ထို့နောက်တွင်မှ ဖက်လျက်သား မခင်လှကို ဘေးသို့ ပက်လက်လှန်ချလိုက်ရင်း ဖိုးချိုက မခင်လှ၏ ကိုယ်ပေါ်တွင် ပါသွားသည်..။ မခင်လှ၏ ကျောပြင်လေး အိပ်ယာနှင့် ထိသည်နှင့် ဖိုးချိုက ဒူးထောက်လိုက်သည်..။ ထိုအခါတွင်တော့ သူတို့နှစ်ယောက်မှာ လှေ ကြီးထိုး ပုံစံဖြစ်သွားပြီး မခင်လှက ပက်လက်လှန်လျက် ဒူးထောင်ပေါင်ကားလုပ်ထားပြီး ဖိုးချိုက သူမ၏ ထောင်ထားသော ပေါင် နှစ်ချောင်းကြားတွင် ဒူးထောက်လျက် ရှိနေသည်..။ ပုံစံပြောင်းခြင်းကြောင့် မခင်လှ၏ စောက်ခေါင်းထဲသို့ တဆုံးထည့်ကာ ဖိ ကပ်ထားသော ဖိုးချို၏ လီးကြီးမှာ အပြင်သို့ တဝက်ခန့်ထွက်နေလေသည်..။ ထိုအပြင်သို့ တဝက်ခန့်ထွက်နေသော လီးကြီးကို ဖိုး ချိုက တစ်ချက်ထဲနှင့် ဆောင့်၍သွင်းလိုက်သည်..။
ဗြစ်…..ဒုတ်….အ……အမေ့…….အီး….အင့်…… မခင်လှ၏ ဝတ်လစ်စလစ် ကိုယ်လုံးလေး သိမ့်ခနဲလှုပ်သွားသည်..။ ဖိုးချိုက မခင် လှ၏ နို့နှစ်လုံးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် လှမ်း၍ဆွဲကိုင်ကာ လီးတန်ကြီးကို တဆုံးနီးပါး ထုတ်၍ အားပါးတရ ဆောင့်၍လိုး တော့သည်..။ ပြွတ်….ဗြစ်……ဒုတ်…..အင့်.အဟင့်…….ပြွတ်ပြွတ်……. မခင်လှကလည်း အောက်မှနေ၍ အငြိမ်မနေ ဖိုးချို၏ ဆောင့်ချက်နှင့် အညီ စောက်ပတ်ကြီးကို ကော့၍ကော့၍ ပေးနေရုံမျှမက တစ်ချက်တစ်ချက်လည်း ကော့ ဝိုင်းဝိုင်းပေးသည်..။ ဖိုးချို၏ဆောင့်ချက်တွေက တဖြေးဖြေး အားပါလာရုံမျှမက သွက်၍လည်းလာသည်..။ မခင်လှ ဆက်ပြီး ကြာကြာမထိန်းနိုင်တော့ ပါ…။ သူမ၏ နို့နှစ်လုံးကို ညှစ်ကိုင်နေသော ဖိုးချို၏ လက်ဖျံနှစ်ဖက်ကို သူမ၏ လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ညှစ်ကိုင်လိုက်ကာ ခါးကကော့ ကော့တက်သွားရင်း ပြီးသွားလေတော့သည်..။
ပြွတ်….ဒုတ်…ပြွတ်ပြွတ်….အမလေး….အ…အ..အီး……..အား….ဟင်း….. မခင်လှ၏ မျက်နှာလေးက ရှုံ့မဲ့သွားပြီး စောက်ပတ် အတွင်းသားတွေက စောက်ခေါင်းထဲမှ လီးကြီးကို လက်နှင့် ညှစ်၍ဆွဲဆုတ်လိုက်သည့်အလား ဆွဲညှစ်လိုက်လေတော့ ဖိုးချိုလည်း မခံစားနိုင်တော့ပဲ သုတ်ရေတွေ ပန်းထုတ်လိုက်ရပါတော့သည်..။ ပြီးပါပြီ ။.
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အပြိုကွီး မမ
အနျတီမူ – ဆရာမနီလာနဲ့ ကြှနျတျော